ကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် fronto-limbic functional connection (2019) - Your Brain On Porn
ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ (2019) တွင်လျော့နံရံပစ်ကစားနည်း-limbic functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု
Kneer, Jonas, Viola Borchardt, Christian Kärgel, Christopher Sinke, Claudia Massau, Gilian Tenbergen, Jorge Ponseti et al ။ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအတွက် front-limbic အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုလျော့နည်းသွားသည်။ "
စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ် 108 (2019): 48-56 ။
ကလေး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု နှင့်လျစ်လျူရှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမူအကျင့်တစ်ခုကျယ်ပြန့်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်တိုးမြှင့်စွန့်စားမှု, နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ နှင့်တိုးမြှင့နှုန်းထားများ သတ်သေအပြုအမူ။ ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု၏အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သုတေသန၏ကြီးမားသောငွေပမာဏကိုဆန့်ကျင်အနည်းငယ်သာသူငယ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ နှင့်ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းပံ့ပိုးသည့်အာရုံခံကျောထောက်နောက်ခံပြု။
ဤသည်လေ့လာမှုမှာကွဲပြားခြားနားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး ပြည်နယ်အနားယူ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု Non-pedophilic ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအကြား (RS-FC အသင်း) (N ကို = 20; CSO-P) နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (N ကို = 20; HC) လိုက်ဖက်မယ့်အမျိုးအနွယ်ကို-based ချဉ်းကပ်နည်းကိုသုံးနိုင်သည်။ CSO-P ကိုအတွက် RS-FC အသင်း၏ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏အာရုံ prefrontal နှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်အမူအကျင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အမြင့်မားသက်ဆိုင်ရာ limbic ဒေသများပေါ်တွင်တင်ခံခဲ့ရသည်။
ရလဒ်များညာဘက် centromedial အကြား RS-FC အသင်း၏သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချရေးထင်ရှား amygdala နှင့်လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex ကလေးအများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ကျန်းမာဦးနှောက်ထဲမှာတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အထက်မှအောက်သို့လည်းမရှိ, ထိုပေးထား inhibitory ထိန်းချုပ်မှု limbic အဆောက်အဦကျော် prefrontal ၏, ဤရလဒ်များ amygdala နှင့် dorsolateral prefrontal cortex အကြား RS-FC အသင်းလျော့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဤအသဘောတရားများကိုတစ်လေးနက်တဲ့နားလည်မှုကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့၏ဖြစ်ပျက်မှုများ၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေ, အဖြစ်ကပိုထူးခြား၏နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသငျ့သညျမြားနှငျ့ ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်.
functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI)
ကလေးသူငယ်လိင်မှုဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူ (CSO) ကလေးသူငယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့, ကုလသမဂ္ဂအပိုဒ် 1989 နှင့် 19 အတွက် 34 အတွက်ကလေးသူငယ်များ၏အခွင့်အရေးအတွက်ကြေညာဘဲလျက်ရှိနေသော်လည်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလေးတွေသန်းပေါင်းများစွာထိခိုက်မယ့်ကျယ်ပြန့်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်တယ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (Barth et al ။ , 2013; Stoltenborgh et al ။ , 2011) ။ ကလေးသူငယ်လိင်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုအများဆုံးအများပြည်သူစိုးရိမ်ပူပန်မှုကျလာသောဆုံးနဲ့, တိုင်းရင်းသားဘာသာရေးနှင့်လူမှုစီးပွားရေးအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးပေါ်ပေါက်သောပြစ်မှုများအကြားရှိပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲရေတိုနှင့်ရေရှည်ကျန်းမာရေးအကျိုးဆက်များကနေအထိပြင်းထန်များမှာ Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ စိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမမှန်မှ (PTSD) အဖြစ်တစ်ခုတိုးအပါအဝင် သတ်သေအပြုအမူ (Hornor, 2010; ဆက်ပေးသူ et al ။ , 2007) ။ ဘက်စုံ Meta-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု (CSA) ၏အထွေထွေပျံ့နှံ့ထက်ပို 10% ဖြစ်ခန့်မှန်းPereda et al ။ , 2009; Stoltenborgh et al ။ , 2011) ။ အကြောင်း3ယောက်ျားလေးများ၏% နှင့်မိန်းကလေးများ၏ 9% (ပြင်းထန်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်အတင်းအဓမ္မလိင်ဆက်ဆံ၏သားကောင်များဖြစ်ကြFinkelhor et al ။ , 2014; Häuser et al ။ , 2011) ။ ဤအမြင့်မားတဲ့ပျံ့နှံ့နှုန်းနှင့်ဤပြစ်မှုများကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေသော်လည်းနည်းနည်း neurobiological CSO ၏ကျောထောက်နောက်ခံနှင့် CSO မှဦးဆောင်သည့်ယန္တရား (အကြောင်းကိုလူသိများသည်Kärgel et al ။ , 2015) ။ ရင်တောင်မှ pedophilia CSO ကျူးလွန်များအတွက်အဓိကအန္တရာယ်အချက်အဖြစ်လူသိများသည် pedophilia (CSO များအတွက်လုံလောက်သောမဟုတ်သလိုလိုအပ်သောမဟုတ်ဖြစ်ပါသည်Seto, 2008; Seto et al ။ , 2006) ။ ပြစ်မှုထင်ရှား child sexual abuse အကြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ (အားလုံးပြစ်မှုများ၏အကြောင်းကို 50% Non-pedophilic CSO ကကျူးလွန်နေကြသည်ကိုပြသMaletzky နှင့် Steinhauser, 2002) ။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသော authoritative နံပါတ်များကိုတစ်ဦးကိုနှိပ်လိုအပ်ချက်များမှာအများဆုံး CSO အစီရင်ခံကြသည်မဟုတ်အဖြစ်လက်ရှိ Non-preference ကိုတိကျတဲ့ CSO ၏အချိုးအစားအကြောင်းကိုသာထင်မြင်ချက် (ရှိပါတယ်Hanson et al ။ , 1999) ။ အဆိုအရ Blanchard ဖြစ်ပြီး et al ။ (2006)ကလေးများဆန့်ကျင်အများဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများကို non-pedophilic ကျူးလွန်သူကကျူးလွန်နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားပြစ်မှုများ (pedophilic ကျူးလွန်သူသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုအကြမ်းဖက်ခံရခြင်း, ထိုးဖေါက်ခံရခြင်းဖြစ်လေ့Kingston et al ။ , 2007) ။ သားသမီးတို့အဘို့တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုမပါဘဲကျူးလွန်သူအတွက် CSO ၏အခြေခံယန္တရားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်လေ့လာရေးရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု ရှုပ်ထွေးသောအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောအကြောင်းရင်းများ၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါ (Thakker နှင့်ရပ်ကွက်, 2012) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အကြမ်းဖက်မှု (Davidson et al ။ , 2000အထူးသဖြင့်), နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကို (Howell et al ။ , 2004; ရပ်ကွက်နှင့် Beech, 2006), မကြာခဏ (စိတ်ခံစားမှု၏ချို့ယွင်းစည်းမျဉ်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းGillespie et al ။ , 2012; Langton နှင့်မာရှယ်, 2000; ရပ်ကွက်နှင့် Hudson, 2000) ။ ထို့အပွငျအနှုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ပြည်နယ်များကိုထိန်းညှိဖို့ချို့ယွင်းစွမ်းရည် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်အဖြစ်အထောက်အကူပြုကြောင်းစာပေစကားတစ်ခုကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်ရှိHanson နှင့် Harris က, 2000).
တစ်ဦးအာရုံကြောအဆင့်တွင်, ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်လေ့လာမှုများအထူးသဖြင့်, limbic အဆောက်အဦများ၏ဆက်စပ်မှုတွေဖော်ထုတ် amygdala နှင့် prefrontal cortex (PFC) (စိတ်ခံစားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးကြီးဖြစ်Davidson et al ။ , 2000; Dörfel et al ။ , 2014; Gillespie et al ။ , 2012; Lee က et al ။ , 2012; Paschke et al ။ , 2016) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Beauregard et al ။ , 2001; Georgiadis နှင့် Kringelbach, 2012; Klucken et al ။ , 2016; Stoléru et al ။ , 2012) ။ ဒါဟာ (ထို PFC amygdala-မောင်းနှင်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုလူမှုရေးအရသင့်လျော်သောထုံးစံ၌ရူးနှမ်းဖြစ်ကြောင်းသေချာယူဆနေသည်Kärgel et al ။ , 2015; Rosenbloom et al ။ , 2012) ပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ prefrontal substructures ၏အဓိပ္ပါယ်အခန်းကဏ္ဍလုံးဝနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခု Integrated စင်တာအဖြစ် amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကို (စိတ်ခံစားမှု aberrant ရန်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများမှတဆင့်ထောက်ခံထားပြီးEtkin နှင့်အာမခံ, 2007; Kamphausen et al ။ , 2013) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ (Baird et al ။ , 2004; Mohnke et al ။ , 2014; Schiltz et al ။ , 2007; Walter et al ။ , 2008), အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူ (Kärgel et al ။ , 2015; Poeppl et al ။ , 2014) ။ အဆိုပါ amygdala တစ်တသားတည်းတည်ဆောက်ပုံသည်မဟုတ်, သုံးအဓိက subdivisions ပါဝင်တဲ့ရှုပ်ထွေး entity: တစ် basolateral တစ်အပေါ်ယံနှင့် centromedial ရှုပ်ထွေးသော, ဗဟိုပါဝင်သည်ဟုနှင့် medial နျူကလိယ (CMA; Amunts et al ။ , 2005; ရွိုင်း et al ။ , 2009) ။ အဆိုပါ CMA (အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု directing အတွက်အဆုံးအဖြတ်အခန်းကဏ္ဍko et al ။ , 2015) အမှစီမံချက်များမှတဆင့် brainstem နှင့် cortical နှင့် striatal ဒေသများ (Davis က, 1997; ရွိုင်း et al ။ , 2009), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစည်းရုံးရေးအပါအဝင် (Gillespie et al ။ , 2012) ။ အတော်ကြာသုတေသီများ (မျိုးပွားမှုအပြုအမူများထိန်းချုပ်ရေးအတွက် medial နျူကလိယ၏သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍငြင်းDominguez et al ။ , 2001; Kondo, 1992; Newman က, 1999) ။ ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထား (ဆုလာဘ်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် CMA များအတွက်ထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍထောက်ပံ့နေသည်က Parker et al ။ , 2014; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2014) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်။ ထို့ပြင် CMA ယင်းမှခန္ဓာဗေဒချိတ်ဆက်ဖြစ်ပါသည် hypothalamusလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာ directing အတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်သော (Poeppl et al ။ , 2015), ဒါပေမယ့်လည်းရန်လိုသည့်အပြုအမူ (Falkner နှင့်လင်း, 2014) ။ ထိုမှတပါး, Beauregard et al ။ (2001) အဆိုပါ amygdala အဆိုပါ hypothalamus ဖို့ CMA ထံမှစီမံချက်များမှတဆင့် endocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုများ၏မော်ဂျူအတွက်အရေးကြီးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ မကြာမီကမော်ဒယ်များပြောင်းလဲ CMA လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းငြင်းခုန် စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း စိတ်စရိုက်များ၏အဆင့်မြင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိုငွေပြမှု (Moul et al ။ , 2012) ။ အထူးသဖြင့်, ထို amygdala နှင့် PFC အကြားတစ်ဦးလျော့အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုတစ်ခု neurobiological အင်္ဂါရပ်အဖြစ်အကြံပြုထားသည် psychopathy (Motzkin et al ။ , 2011) ။ ခန္ဓာဗေဒအမှတ်အသားများ (အပေါ် အခြေခံ.Öngür et al ။ , 2003) နှင့် functional ဖြစ်စေတိကျသော (Bechara, 2004), သက်ဆိုင်ရာ prefrontal ဒေသများ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အမြင်ကျယ်သည့် orbitofrontal (OFC), အ dorsolateral (dlPFC), အ ventrolateral နှင့် medial PFC သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ခန္ဓာဗေဒသဲလွန်စလေ့လာမှုများ amygdala နှင့် OFC, ventrolateral PFC နှင့် dorsomedial PFC (အကြားခိုင်မာတဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသရုပ်ပြခဲ့ကြပေမယ့်Ghashghaei et al ။ , 2007), အ dlPFC ဖြစ်ကောင်းပါ (OFC မှတဆင့်သွယ်ဝိုက် limbic အဆောက်အဦကျော်က၎င်း၏အဓိကသြဇာလွှမ်းမိုးပြုပြင်Gillespie et al ။ , 2012; Phillips က et al ။ , 2008) ။ ဤရွေ့ကားဒေသများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှယူဆနေကြတယ်, arousal နှင့်အပြုအမူ (Beauregard et al ။ , 2001; လီယွန်-Carrion et al ။ , 2006; Toates, 2009) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ထကြွလွယ်သောအကြမ်းဖက်မှု (Davidson et al ။ , 2000) ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex (OFC) (ဦးနှောက်အရှိဆုံးယုတ်ညံ့တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်ဦးနှောက်၏တိုကျရိုကျတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း၏ ventral မျက်နှာပြင်ယူထားသောFuster, 1997) ။ အဆိုပါ OFC စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းတစ်အလယ်ပိုင်းအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ အဆိုပါ OFC အတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်ကပ်လျက် PFC ဒေသများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာ syndrome ထုတ်လုပ်ရန် ထကြွလွယ်သော နှင့်ကျူးကျော် (အသေးစိတ်ကြည့်ရှုဘို့ Rolls, 2004) ။ (Gillespie et al ။ , 2012) အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် amygdala ရန်၎င်း၏ခိုင်မာတဲ့ချိတ်ဆက်မှုစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းနှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု၏အသင်းအဖွဲ့နားလည်သဘောပေါက်အတွက် OFC ၏အရေးပါမှုကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ OFC နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်အဆောက်အဦများ, အထူးသဖြင့် amygdala, စိတ်ခံစားမှုပြည်နယ်များ၏အောင်မြင်သောစည်းမျဉ်းများအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ဒေသများတစ်ဦးထံမှ inhibitory ဆက်သွယ်မှု, (ဖြစ်နိုင် amygdala ဖို့ OFC, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုဖိနှိပ်ဖို့နောက်ခံယန္တရားဖြစ်ခြင်းများအတွက်ယူဆနေသည်နှင့်လည်းထကြွလွယ်သောအကြမ်းဖက်မှုများအတွက်သော့ချက်အခန်းကဏ္ဍDavidson et al ။ , 2000) နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Schmidt က et al ။ , 2017). Stoléru et al ။ (2012), လိင်စိတ်နိုးထနှင့်ယူဆချက် amygdala များ၏ဖိနှိပ်မှုများအတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခြင်းအဖြစ် OFC postulated OFC နှင့်အခြားသူများအကြား, အအဖြစ်, PFC medial အာရုံကြောအလွှာ လိင်စိတ်နိုးထ၏။ တွင် Georgiadis နှင့် Kringelbach (2012)အဆိုပါ amygdala နှင့် Orbital နှင့် ventromedial cortical လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်လိင်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်။ ၏ ALTER အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု OFC နှင့် amygdala တို့အကြားမှာလည်း (CSO အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည်Kärgel et al ။ , 2015) ။ အပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအတွက် dlPFC ၏အခန်းကဏ္ဍကို (ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအငြင်းပွားဖွယ်ရာတစ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်နေဆဲအင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် Grol, 2007က) dlPFC ထဲမှာတည်ရှိသည် တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး နှင့်သိမြင်မှုနှင့်ဆက်စပ် အလုပ်အမှုဆောင် function ကို (Baena et al ။ , 2010) နှင့်မူလတန်းပါဝင်သည် Brodmann ၏ဒေသများ946 ဒါပေမယ့်လည်း 8-9, 9-45, 46-10 နှင့် 46-45 (နှင့်Rajkowska နှင့် Goldman-Rakic, 1995 ခြုံငုံသုံးသပ်သည် ဖြစ်. , Miller နဲ့ Cohen ကို, 2001) ။ ဒါဟာမကြာခဏ၏ပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုမှုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုလမ်းညွှန်အားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်များ၏မျှသာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် အာရုံခံလှုံ့ဆော်မှု နှင့်မော်တာအစီအစဉ်များ (Curtis နှင့် D'Esposito, 2003) နှင့် reappraisal ၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းကိုအထောက်အကူပြုဖို့စဉ်းစားနေပါတယ် (Golkar et al ။ , 2012), နှင့် ရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြုအမူ (Ballard et al ။ , 2011) ။ သို့သော်လည်း (လိင်စိတ်နိုးထဆက်စပ်Beauregard et al ။ , 2001; လီယွန်-Carrion et al ။ , 2006), hypersexuality (Schmidt က et al ။ , 2017) နှင့် Impulse (ko et al ။ , 2015; ယန်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာ, 2009) စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုကွိုးစားအားထုဖို့လမ်းအတွက် (Delgado et al ။ , 2008) Lee က et al ။ (2012) (အလှည့်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်ကိုယ်စားပြုရသောအနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းများအတွက်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ငှါ, dlPFC နှင့် amygdala တို့အကြားသော functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု (FC) ကိုတွေ့ရပ်ကွက်, 2014) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, dlPFC နှင့် amygdala တို့အကြားပုံမှန်မဟုတ်ဘဲစူးနေတယ်ဆက်သွယ်မှု (အကြမ်းဖက်အပြုအမူများအတွက်မြင့်အန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Davidson et al ။ , 2000), Impulse (ko et al ။ , 2015), hypersexual အပြုအမူ (Schmidt က et al ။ , 2017), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှု recidivism (Poeppl et al ။ , 2013စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်ထကြွလွယ်သောကျူးကျော်အတွက်), ပြင်းထန်လိုငွေပြမှု (နယူး et al ။ , 2007) ။ အဆိုပါ PFC ၏ task က amygdala ၏ output ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါသည်နေတုန်းအရှင် amygdala ကိုဆွဲထုတ်စိတ်ခံစားမှုအတွက်အဓိကဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်း၏ပြဿနာများ CSO အတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။
အများစုမှာကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်း related လေ့လာမှုများပြစ်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကို၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အကောင့်မပြုခဲ့ pedophilic ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်အများအပြားလေ့လာမှုများအပေါ်ကောက်ယူနေကြသည်။ စာပေ၏တစ်ဦးကကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ဘဲ pedophilia ထက် CSO, အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း (များတွင်လိုငွေပြမှုမှဆက်စပ်ကြောင်းအကြံပြုKärgel et al ။ , 2016, 2015; Poeppl et al ။ , 2013) ။ ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရည်ရွယ် ပြည်နယ်အနားယူ ဆေးခန်းဂရုတစိုက်အကဲဖြတ် Non-pedophilic ကလေး functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အဆိုပါ amygdala ကွန်ယက်, စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အမူအကျင့်များနှင့်လိင်စိတ်နိုးထများအတွက်အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာ။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းနှင့် ပတ်သက်. prefrontal cortex အတွက် amygdala နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုမျှော်လင့်။ ဒါဟာသုတေသနထစ်အငေါ့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနဲ့ deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ် CSO မှကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကုထုံးချဉ်းကပ်အသိပေးအကြားဆက်ဆံရေးပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုကိုဦးတည်အထောက်အကူပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်။
2.1 ။ သင်တန်းသားများကို
သင်တန်းသားများကိုအရင်းခံကျတာကတော့ "ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောယန္တရားများလို့ခေါ်တဲ့ဂျာမန် Multi-site ကိုသုတေသနစီမံချက်၏မူဘောင်အတွင်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် Pedophilia ကလေးများဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ "(NeMUP; www.nemup.de) ။ 400 သင်တန်းသားများထက်ပိုစုစုပေါင်း NeMUP နမူနာကနေ non-pedophilic ဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ဒေတာများကလေးသည်ကောက်ယူပြီးလျှင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု , Hannover Medical School ကျောင်းတွင်နှင့်အက်ဆင်းတက္ကသိုလ်ဆေးရုံ (CSO-P ကို, N ကို = 20) မှာအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ပုံမှန်ကျန်းမာတဲ့ထိန်းချုပ်မှု (HC, N ကို = 20) အသက်အရွယ်မှလေးစားမှုနှင့်အတူလိုက်ဖက်, အိုင်ကျူ သန်နှင့် လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ (ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 1) ။ နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦး 3T Skyra MRT ပေါ်မှာ data တွေကိုဝယ်ယူနှင့် CSO-P ကိုဘာသာရပ်များအများစုရှိစုဆောင်းခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ဤဆိုဒ်များကနေနမူနာဖို့ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ အလားအလာရှိသောရှက်ကြောက်ဘို့အကောင့်စေရန်, အုပ်စုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့် ပတ်သက်. လည်းနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ (နောက်ဆက်တွဲ S1, S2 & S3)။ CSO တစ်သမိုင်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များပွုပွငျအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ CSO ၏သမိုင်းလိင်သူတို့ကိုယ်သူတို့လှုံ့ဆော်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူစအို / အင်္ဂါဇာတ်ကိုသူငယ်မထိုးဖောက်၏လုပ်ရပ်များပါဝင်သော 14 ၏နှစ်အောက်အရွယ်မရောက်သေးသူဆန့်ကျင် CSO အနည်းဆုံးတဦးတည်းအမှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ဖယ်စံအာရုံကြောသို့မဟုတ်စူးရှခဲ့ကြ စိတ်ရောဂါမမှန် အတွင်းအကဲဖြတ် Semi-စနစ်တကျအင်တာဗျူးများ (နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်; Wittchen et al ။ , 1997), အရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု / မှီခိုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာသို့မဟုတ် pedophilia ၏ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောလက်ရှိဆေးဝါး၏စူးရှသောဖြစ်စဉ်များ။ သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှ ယူ. , စိတ် အကဲဖြတ်မတိုင်မီအနည်းဆုံး3ရက်သတ္တပတ်၏အကာလအတွက်ဆေးဝါး။ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအများပြည်သူအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ကြော်ငြာများမှတဆင့်အသိုင်းအဝိုင်းထံမှစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုတစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီသုတေသန site ၏ကျင့်ဝတ်ကော်မတီကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုထည့်သွင်းမခံရမီလေ့လာမှု protocol ကိုရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြကိုပေး၏နှင့်၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 ။ လေ့လာမှုအုပ်စုများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ။
ကိုက်ညီ parameter သည် CSO-P (N ကို = 20) HC (N ကို = 20) HC vs. CSO-P ကို
လိင်တိမ်းညွတ် (hetero- / Homo / ရိုးရိုး) 16 /2/216 /2/ 2
သန် (r / ဌ / amb) 18 / 1 / 1 18 / 1 / 1
ဆိုလို SD ဆိုလို SD t-တန်ဖိုးကို p-တန်ဖိုးကို
အသက်အရွယ် 38.25 8.54 45.20 11.16 1.128 .266
WAIS အိုင်ကျူခန့်မှန်းချက် 90.5 13.51 102.77 23.89 1.833 .075
caption: သန် ဂျာမန် Edinburgh လက်တစ်ဖက် Inventory တစ်ခုအဆင်ပြေအောင် 10-item ကိုဗားရှင်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းထောက်လှမ်းရေးရမှတ်ဂျာမန်၏အတိုဗားရှင်းလေး subtests ထံမှ extrapolated ခဲ့သည် WAIS [အမှတ်စကေးရမှတ် (အောက်ပါပုံသေနည်းကိုသုံးပြီးစကားစု) + အမှတ်စကေးအချက်များ (တူညီ)] * 3.0 + [အမှတ်စကေးအချက်များ (ပိတ်ပင်တားဆီးမှုဒီဇိုင်း) + အမှတ်စကေးအချက်များ (matrix ကိုဆင်ခြင်ခြင်း)] * 2.5 ။ အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်များနှစ်နမူနာသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် t-test ။ သူငယ်၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ Abbr .: CSO-P ကို ​​= Non-pedophiles လိင်ဖောက်ပြန်တဲ့။ HC ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု = ။ r = လက်ျာဘက်, ဌ = လက်ဝဲ, amb = ambidextrous ။ SD က = စံသွေဖည်။ N ကိုအုပ်စုဘာသာရပ်များအရေအတွက် = ။
2.2 ။ လက်တွေ့အကဲဖြတ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမေးခွန်း
ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတှငျကြှနျုပျတို့ psychopathology နှင့်လိင်သြဇာလွှမ်းမိုးဖို့လူသိများသည်အခြားသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူပြစ်မှု-related ဝိသေသလက္ခဏာများ၏အသင်းအဖွဲ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက် deviant အပြုအမူ။ ထို့ကြောင့်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတို့အတွက်ကျနော်တို့ကအောက်ပါမေးခွန်းထည့်သွင်းခြင်းနှင့် Semi-ဖွဲ့စည်းပုံမှာ လက်တွေ့အင်တာဗျူး: DSM-IV-TR ဝင်ရိုးငါ (SCID ငါ) နှင့်ဝင်ရိုး II ကို (SCID II ကို; Fydrich et al ။ , 1997; Wittchen et al ။ , 1997; မြင် စားပွဲတင် 2); Hamilton ကစီးပွားပျက်ကပ် rating စကေး (Ham-D ကို; Hamilton က, 1996b); Hamilton ကတော့ပူပန်ခဲ့သည် Rating စကေး (Ham-တစ်ဦးက; Hamilton က, 1996a); ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာ (CTQ; Bernstein နှင့်က Fink, 1998); Barrat ထကြွလွယ်သော စကေး ​​(bis; Patton et al ။ , 1995); နှင့် The Wender Utah ခဲ့သည် Rating စကေးလူကြီးများ (Homburger ADHD အကြေးခွံ (HASE) အတွက် Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) အတွက်; Rösler et al ။ , 2008; မြင် စားပွဲတင် 3) ။ RS-FC အသင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုများ၏ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အားလုံးအကဲဖြတ်သည်ဤတူရိယာသုံးစွဲဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားကြုံတွေ့သုတေသနအပေါင်းအသင်း, မှတစ်ဆင့်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ တစ်စက္ကန့် session တစ်ခုမှာတော့ MRI အကဲဖြတ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်တိုင်းတာအပါအဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ CTQ, bis နှင့် ADHD ဒေတာနှစ်ဆယ်ထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များနှစ်ခုများအတွက်ရရှိနိုင်ကြဘူး။ ADHD အချက်အလက်များကို CSO ဘာသာရပ်များတဦးအဘို့လည်းရရှိနိုင်ကြဘူး။ ပြစ်မှုနှင့်သားကောင်ဝိသေသလက္ခဏာများနောက်ဆက်တွဲထဲမှာအသေးစိတ်ပြသနေကြသည် S1.
ဇယား ၂။ SKID I & II အင်တာဗျူးကို အခြေခံ၍ စိတ်ကျန်းမာရေး ၀ င်ရိုး ၁ နှင့် ၀ င်ရိုး -၂ ရောဂါများ။
CSO-P (N ကို = 20) HC (N ကို = 19) HC vs CSO-P ကို
စိတ်ရောဂါ Diagnosis N ကို (%) N ကို (%) p-တန်ဖိုးကို OR RR
ဝင်ရိုး-1-Disorder 17 (85%)2(11%) 48.17 5.97
အကျိုးသက်ရောက်စေ Disorder9(45%)2(11%) .031 6.96 2.08
စိုးရိမ်စိတ် Disorder7(35%)0(0%) .008 - 2.46
စွဲခြင်းရောဂါ 10 (50%)0(0%) - 2.90
ဝင်ရိုး-2-Disorder9(45%)0(0%) .001 - 2.73
စပျစ်သီးပြွတ်တစ်ဦးက2(10%)0(0%) .487 - 2.06
စပျစ်သီးပြွတ်ခ 8 (40%)0(0%) .003 - 2.58
စပျစ်သီးပြွတ်ကို C4(20%)0(0%) .106 - 2.19
မှတ်စု။ သူငယ်၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ CSO-P ကို ​​= Non-pedophiles လိင်ဖောက်ပြန်တဲ့; HC = ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု; N ကို = အုပ်စုဘာသာရပ်များအရေအတွက်; OR = လေးသာမှုအချိုးအစား / RR = ဆွေမျိုးစွန့်စားမှု, အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်များသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် ကိုမျှားသောတံငါ-အတိအကျ-စမ်းသပ်ခြင်း.
စားပွဲတင်3။ နမူနာများ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ။
CSO-P ကို HC HC vs CSO-P ကို
N ဆိုလို SD N ဆိုလို SD t-တန်ဖိုးကို p-တန်ဖိုးကို
Hamilton ကတော့ပူပန်ခဲ့သည် Rating စကေး 20 4.45 6.013 20 1.00 2.471 2.373 .023
Hamilton ကစီးပွားပျက်ကပ်ခဲ့သည် Rating စကေး 20 5.55 6.832 20 .65 1.089 3.167 .003
စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးမှု 20 14.00 5.786 18 6.22 1.114 5.892 <.0001
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု 20 10.80 4.618 18 5.22 .428 5.376 <.0001
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု 20 9.95 5.511 18 5.44 1.149 4.946 .002
စိတ်ခံစားမှုလျစ်လျူရှု 20 13.90 4.482 18 8.17 2.121 5.118 <.0001
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလျစ်လျူရှု 20 8.45 3.170 18 6.61 1.975 2.117 .041
Barratt Impulse စကေး
အာရုံစူးစိုက်မှု Impulse 20 16.94 3.101 18 15.56 3.294 1.33 .192
မော်တော် Impulse 20 23.66 4.813 18 20.94 3.351 2.00 .053
non-စီမံကိန်း Impulse 20 26.35 4.966 18 24.56 3.468 1.27 .210
Homburger ADHD-ကြေးခွံ (HASE)
Unattention 18 6.50 3.417 18 3.94 5.252 1.730 .093
ထကြွလွယ်သော 18 3.06 2.645 18 1.28 1.809 2.354 .025
Hyperactivity 18 3.61 3.109 18 2.00 2.301 1.767 .086
Wender-Utah-ခဲ့သည် Rating-Scale ကို (WURS-K သည်)
ထကြွလွယ်သော 18 5.68 3.250 19 8.44 3.417 -2.519 .017
ငှေပေါငျး 18 32.94 17.184 19 12.00 15.249 3.913 <.0001
မှတ်စု။ CSO-P ကို ​​= ကလေးက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တစ်ဦး pedophilic preference ကိုမပါဘဲ; HC = ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု; N ကို = အုပ်စုဘာသာရပ်များအရေအတွက်; SD က = စံသွေဖည်။ အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်များ Two-နမူနာသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် t-test ။
2.3 ။ Neuroimaging
အားလုံးပုံရိပ်တွေ3ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်တပ်ဆင်ထားနှစ်ခုသီးခြား 32T Siemens Skyra MRI စကင်နာ, Hannover အတွက်တဦးတည်းနှင့်အက်ဆင်းအတွက်တဦးတည်းအပေါ်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဆိုဒ်များကိုဖြတ်ပြီး signal ကိုအတက်အကျထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါစေရန်, စံ MRI Phantom တည်ငြိမ်မှုအတိုင်းအတာ (ကောက်ယူခဲ့သည်Hellerbach et al ။ , 2013) ။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ T1 ပုံရိပ်ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်သင်တန်းသားများသည် ၁၁ မိနစ်ကြာအနားယူသည့် fMRI စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေရန်၊ မျက်လုံးများကိုပိတ်ထားရန်နှင့်သူတို့၏စိတ်များပျံ့နှံ့စေရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ T11 ပုံရိပ်များကို MPRAGE sequence (အချပ် = ၁၉၂၊ FoV = ၂၅၆ မီလီမီတာ၊ voxel အရွယ်အစား = ၁ × ၁ × ၁ မီလီမီတာ၊ TR = ၂.၅ စက္ကန့်)၊ TE = ၄.၃၇ ms ဖြင့်ရရှိခဲ့သည်။ လှန်ထောင့် =7°, အကွာအဝေးအချက် = 50%) ။ Functional T2 * အလေးချိန်ပုံရိပ်တွေတစ်ခုအသုံးပြု။ ရယူခဲ့ကြသည် ပြိုပုံရိပ်ပဲ့တင်သံ (EPI) အစီအစဉ် (အချပ် = ၃၈၊ မြင်ကွင်း = ၂၄၀ မီလီမီတာ၊ voxel အရွယ်အစား = ၂.၃ × ၂.၃ × ၃ မီလီမီတာ၊ အတွဲအရေအတွက် = ၂၇၅၊ အထပ်ထပ် = ၂.၄ စ၊ ပဲ့တင်သံ = ၃၀ ms၊ လှန်ထောင့် = ၈၀ ° , အကွာအဝေးအချက် = 38%) ။
2.4 ။ ဒေတာကိုအပြောင်းအလဲနဲ့
ဒေတာကို SPM 8 များအတွက် (ကွိုဆို Trust မှရေးစင်တာကိုအသုံးပြုပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည် Neuroimaging, လန်ဒန်, အင်္ဂလန်) နှင့် DPABI 2.3 (သီချင်း et al ။ , 2011; yan et al ။ , 2016) ။ အဆိုပါ preprocessing ခြေလှမ်းများအထက်ဖော်ပြပါစာရေးဆရာများအားဖြင့်ဖော်ပြထားတဲ့စံ protocol ကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ပထမငါးပုံရိပ်တွေကနဦးအချက်ပြ၏မတည်ငြိမ်မှုများနှင့်စကင်နာဖို့ဘာသာရပ်များများ၏လိုက်လျောညီထွေများအတွက်အကောင့်မှဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ပုံရိပ်တွေရွေ့လျားများအတွက်ပြင်ဆင်ရန်အချပ်အချိန်အတောအတွင်းပုံရိပ်မှတညျ့နှင့် realigned ခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမဘာသာရပ်ပြသ ဦးခေါင်းလှုပ်ရှားမှုကို လည်ပတ်အတွက်ဘာသာပြန်ချက်သို့မဟုတ်3°ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတွက်3မီလီမီတာထက် သာ. ကြီးမြတ်။ ပုံရိပ်တွေပါ (အာရုံကြောသိပ္ပံ (MNI) stereotaxic အာကာသမှ Spatial ပုံမှန်ခဲ့ကြသည်Collins et al ။ , 1998) စုစည်းသုံးပြီး segment (T1 ပုံရိပ်ပေါ်Ashburner နှင့် Friston, 2005) နှင့်3×3×3မီလီမီတာမှ resampled3။ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအချက်ပြ၏အလားအလာသတင်းရင်းမြစ် (ထွက် regressed ခဲ့ကြသည်Weissenbacher et al ။ , 2009), ထိုကဲ့သို့သော voxel-တိကျတဲ့ 12 ရွေ့လျားမှု parameters တွေကိုအပါအဝင်စိတ်အညစ် covariates, (အဖြစ်Satterthwaite et al ။ , 2013; yan et al ။ , 2013); အဖြူကိစ္စ signal ကို; နှင့် cerebrospinal fluid signal ကို။ ဒီအပြောင်းအလဲနဲ့ခြေလှမ်းများ၏တိကျသော၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုဖို့ပြသခဲ့ပြီးအဖြစ်အပြင်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ signal ကိုထွက် regressed ခဲ့သည် အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု (Fox က et al ။ , 2009) နှင့်ရွေ့လျားမှုအပိုငျးအများ၏ဆုံးမပဲ့ပြင်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ် (yan et al ။ , 2013) ။ ရရှိလာတဲ့ပုံရိပ်တွေထို့နောက်ယာယီ Band-pass ခဲ့ကြသည် (0.01-0.08 Hz) filtered ။
အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုနည်းလမ်းများသည်အနည်းငယ်သော ဦး ခေါင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုအလွန်အမင်းထိခိုက်လွယ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဘောင်ပညာရှိရွှေ့ပြောင်းမှု (FWD) အနိမ့်အမြင့်> 0.4 mm ရှိ Scan များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေ့လျားမှုကိုပွတ်တိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Jenkinson et al ။ (2002)။ ပွတ်တိုက်ပြီးနောက်ဘာသာရပ်များအားလုံးသည်အချိန်ကာလ ၅၀%> ကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ နှစ် ဦး စလုံးဒေတာအစုအတွင်း CSO နှင့် HC အကြားကျန်ရှိသောအချိန်ကာလ၏ FWD တွင်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုများ (p> .50) မရှိပါ။ မပြုမီ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ရုပ်ပုံများ6×6×6မီလီမီတာတစ် Gaussian kernel ကိုအတူပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်3 (ဝက်အများဆုံးမှာအပြည့်အဝအကျယ်) ။
2.5 ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ဒေတာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ရွယ်ရွေးချယ်ရေး: အတွက်အကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုအကဲဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက် amygdala ကွန်ယက်ကို functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု, လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ amygdala မျိုးစေ့-based ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် ROIs အဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်, လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ amygdala ၏ centromedial အပိုင်း (CMA) (မျိုးစပါးအဖြစ်သတ်မှတ်နေတဲ့ဦးခဲ့ကြသည်သဖန်းသီး။ 1) နှင့်ခန္ဓာဗေဒ Toolbox ကနေထုတ်ယူ (Eickhoff et al ။ , 2007; 2006, 2005; Qin et al ။ , 2014), ၎င်းတို့၏အရေးပါအခန်းကဏ္ဍကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း လိုငွေပြမှု (Moul et al ။ , 2012), (အပြုအမူတုံ့ပြန်မှု directingDavis က, 1997; ရွိုင်း et al ။ , 2009), နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစည်းရုံးရေး (Gillespie et al ။ , 2012) ။ Pearson ၏အလုပ်လုပ်သောဆက်သွယ်မှုကိုရယူနိုင်ရန် ဆက်စပ်မှုကိန်း အဆိုပါအကြားတွက်ချက်ခဲ့ကြသည် အချိန်စီးရီး အဆိုပါ amygdala အစေ့များနှင့် ဦး နှောက်၌ရှိသမျှသောအခြား voxels ၏အချိန်စီးရီး၏။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာပုံမှန်ဖြစ်မှုကိုတွက်ချက်ရန်အတွက် Fisher's မှဆက်နွယ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးပါသည် Z-အသွင်ပြောင်း။ ဤရွေ့ကားအသွင်ပြောင်းတန်ဖိုးများ SPM 1 အတွက် 8st အဆင့်အထိမော်ဒယ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦး 2nd အဆင့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, အသက်, site ကိုနှင့်အိုင်ကျူတွင်မော်ဒယ်ခန့်မှန်းချက်သို့ covariates အဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကကျပန်းအကျိုးသက်ရောက်မှု Two-နမူနာ tအုပ်စုများအကြား -tests တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ဖျော်ဖြေခဲ့သည် Zအဆိုပါဆုံးဖြတ်ရန်တစ် voxel ပညာထုံးစံ၌ -values ဦးနှောက်ဒေသများ အဆိုပါ amygdala ကွန်ယက်ကိုအတွင်း amygdala နှင့်အခြား voxels အကြားသိသာထင်ရှားသော FC အသင်းအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုဖေါ်ပြခြင်း။ (မြို့ပတ်ရထားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှောင်ရှားရန်Kriegeskorte et al ။ , 2009) ကိုလည်း "ကို double နှစ်မြှုပ်" ဟုခေါ်တွင် amygdala ကွန်ယက်ကိုဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အသုံးပြုပေမယ့်အတိအကျတူညီ MRI protocols များနှင့်အတူတိုင်းတာမကျန်းမာ 30 ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုလွတ်လပ်သောနမူနာကနေထုတ်ယူခဲ့သည် ကြွင်းသောအရာများအတွင်း amygdala ကွန်ယက်ကို voxels များအနေဖြင့်နမူနာတစ်ခုလုံးတွင် amygdala, p <0.05 (uncorrected) နှင့်သိသာသောဆက်စပ်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်တိုင်းအတွက် amygdala ကွန်ယက်ကိုဒေသ၏အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်မျက်နှာဖုံးအဖြစ်အသုံးပြုသည် (p <0.05, amygdala ကွန်ယက်တစ်ခုလုံးအတွင်းရှိအကြိမ်ပေါင်းများစွာနှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက်တည့်မတ်ပေးသောပမာဏသေးငယ်သည်ကိုကြည့်ပါ) သဖန်းသီး။ 1) (အုပ်စုများအကြားPoldrack, 2007; Worsley et al ။ , 1996).
High-res ပုံရိပ် (297KB) Download
full-size image ကို Download လုပ်ပါ
သင်္ဘောသဖန်း။ 1 ။ အတွက်အကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု ပြည်နယ်အနားယူ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု ဘယ်ဘက်၏ (rs-FC) နှင့်ညာဘက် (ခ) CMA (p <0.05, စပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်မှာ FWE ဆုံးမ): အုပ်စုများအကြား rs-FC အတွက်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုလက်ဝဲသုံးပြီးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ amygdala မျိုးစေ့ဒေသ (က) အဖြစ်။ CSO-P ကိုလက်ျာ CMA နှင့် dlPFC (ဂ) တို့အကြားသိသိသာသာနိမ့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြသခဲ့သည်။ RS-FC ကွဲပြားမှုဟာ MNI စံအာကာသပေါ်မွမ်းမံလေ၏နေကြတယ် template ကို။ ဘားဂရပ်များ dlPFC (ဃ) အသီးအသီးအုပ်စု Z ကိုရမှတ်ဆိုလိုပုံဖော်။ Abbr .: MNI Montreal အာရုံကြောဌာန Institute FWE မိသားစုပညာရှိသအမှားညာဘက် CMA = ညာဘက် centromedial amygdala ။ သူငယ်၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူ CSO-P ကို ​​= Non-pedophiles လိင်ဖောက်ပြန်တဲ့။ HC ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု = ။ RS-FC အသင်း: အနားယူပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု။
ရလဒ်များကိုစပျစ်သီးပြွတ်အဆင့်မှာမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်တညျ့, p <0.05 မိသားစုပညာရှိအမှား (FWE) ကိုအသုံးပြု။ သိသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
2.6 ။ အမူအကျင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
post-hoc ဆက်စပ်မှု (Z-ရမှတ်ဆိုလို) ကိုတစ်ဦးချင်းစီ FC အသင်းတန်ဖိုးတစ်ခုတည်းဘာသာရပ်ဆနျ့ကငျြဘခန့်မှန်းချက် (CES) ကို အသုံးပြု. SPSS v 24 (IBM က Inc က) တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်လေ့လာဆန်းစစ်။ အဆိုပါ SPM24 ကြံစည်မှု function ကိုသုံးပြီး:; ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများ (ညာ CMA) အမျိုးအနွယ်ကိုရွယ်အဆိုပါ MNI အနေဖြင့်အထွတ်အထိပ် voxel -18, 51 မှာကိုသြဒိနိတ်, -8 (dlPFC) FC အသင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောအကြား-အုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုညွှန်း, တည်နေရာများမှထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CES ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် psychometric နှင့်လက်တွေ့တိုင်းတာမှုများ (ADHD, HAM-A, CTQ နှင့် BIS) ။ p <0.05 ၏ Pearson ဆက်စပ်မှုသိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
3.1 ။ ဒေသစစ်တမ်းများနှင့်လက်တွေ့ parameters တွေကို
ကေလး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ အုပ်စုတစု (CSO-P) (CTQ) subscales (အားလုံးငါးယောက်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာအပေါ်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်ခဲ့စားပွဲတင် 3) ။ HAM-A နှင့် HAM-D အရစိုးရိမ်စိတ် (p <0.05) နှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါလက္ခဏာများ (p <0.01) နှင့်မြင့်မားသောနှုန်းထားများမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန် (မန်း - Whitney-U ။ = .015) နှင့်အတိတ်စိတ်ရောဂါဝင်ရိုး -One ရောဂါများ (p = <.001) (စားပွဲတင် 2) ။ CSO-P နှင့်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု (HC) တို့အကြားလက်ရှိ ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေမရှိသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်။ 11 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုကြားတွင်နှင့် 30 CSO- ကြားတွင်; သို့သော်အုပ်စုသည်နှိုင်းယှဉ်ကလေးဘဝအတွက် ADHD ကိုညွှန်း2ထက် (က cut-off-ရမှတ်နှင့်အတူ9တစ်ဦးချင်းစီပိုမိုမြင့်မားသည်သူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝအတွက် ADHD ရောဂါလက္ခဏာတွေ implicating, WURS-K သည်ရမှတ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ထင်ရှား : P) ။ မကွဲပြားမှုရှိခဲ့သည် ထကြွလွယ်သော အဆိုပါအညီ Barratt-Impulse စကေး (bis) ။
3.2 ။ functional ဆက်သွယ်မှု
ထင်ရှား Group မှနှိုင်းယှဉ်သိသိသာသာလျော့ ပြည်နယ်အနားယူ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု (RS-FC အသင်း) ကအတွင်း amygdala လက်ျာ centromedial amygdala (CMA) နှင့်လက်ဝဲဘက်အကြား CSO-P ကိုအတွက် network တစ်ခု dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) (စားပွဲတင်4& သဖန်းသီး။ 1) ။ ; 24 voxels ယင်းထက်သာလွန် PFC သို့တိုးချဲ့နေစဉ်စပျစ်သီးပြွတ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ်ခြင်း (AAL အပေါ်အခြေခံပြီးအလယ်မှာ PFC အတွက်ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီခဲ့သည် Tzourio-Mazoyer et al ။ , 2002) ။ ဘယ်ဘက် CMA နှင့်အခြားဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံအကြား FC ၏အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု HC မှနှိုင်းယှဉ် CSO-P ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ RS-FC အသင်းအကြားမျှသိသာအသင်းအဖွဲ့များရှိခဲ့သည်နှင့် psychometric အဆိုပါ CTQ, Ham-A, Ham-D ကို, ADHS, ဒါမှမဟုတ် bis အပါအဝင်အစီအမံ။ ထို့အပြင်ယင်းတစ်ဦးအမျိုးအစား variable ကိုအဖြစ်ဝင်ရိုး-ငါမမှန်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (အကျိုးသက်ရောက်စေ Yes / No, စိုးရိမ်ပူပန်ဟုတ်ကဲ့ / မစွဲလမ်း Yes / No) ကိုမြေတပြင်လုံးနမူနာနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအတွင်း dlPFC စပျစ်သီးပြွတ်များ၏ထုတ်ယူ parameter သည်ခန့်မှန်းခြေ correlating အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည် သီးခြားစီတစ်ဦးကိုအသုံးပြုပြီး Non-parametric စမ်းသပ်။ သိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုရှာမတွေ့ခဲ့ပါ။
စားပွဲတင်4။ Non-pedophilic ကလေးကအကြားသည် RS-FC အသင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှု လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု။
အမြိုးအနှယျ: ညာဘက် CMA HC> CSO-P
ဖွဲ့စည်းပုံ နောက်ပိုင်းတွင် MNI t-တန်ဖိုးကို စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား p-တန်ဖိုးကို
မှတ်စု။ CMA = centro medial amygdala; MNI = Montreal အာရုံကြောဆိုင်ရာဌာန၊ dlPFC = dorsolateral prefrontal cortex; L ကို = လက်ဝဲ။ r = လက်ျာ။ အုပ်စုများအကြားကွာခြားချက်များ Two-နမူနာသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် t-စမ်းသပ်မှု။ ရလဒ်များမိသားစုပညာရှိအမှားနှုန်းထားများသုံးပြီးမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်ဘို့အတညျ့ခဲ့ကြသည်နှင့် amygdala ကွန်ယက်ကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဖို့, ဒီမြားတှငျပွောငျးလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ပထမဦးဆုံးလေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် ဦးနှောက်အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု Non-pedophilic သူငယ်၏တစ်ဦးသီးသန့်နမူနာထဲမှာကြွင်းသောအရာမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဂရုတစိုက်လိုက်ဖက်ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ရလဒ်ကလေးသည်အတွက်, လက်ျာ CMA နှင့်လက်ဝဲ dlPFC အကြားမှိန်ဖျော့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားများထုတ်ဖော်ပြသ လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ Non-ဖောက်ပြန်တဲ့သူကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်ပါက။ ရလဒ်, အိုင်ကျူအသက်အရွယ်မှတွေကပေါ်ကနေမဟုတ်ကြ, သန်ဒါမှမဟုတ် လိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့ နှင့်စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ဆန္ဒရှိကလေးဘဝအတွေ့အကြုံများဆက်စပ်ဘူး, ထကြွလွယ်သောADHD parameters တွေကို၏, ရောဂါလက္ခဏာတွေ, ဒါမှမဟုတ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ထိုကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေစတင်ခြင်းအဖြစ်အချက်များ, သုတ်ရည်လွှတ်, coitus, ဒါမှမဟုတ် TSO သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံလျော့နံရံပစ်ကစားနည်း-limbic ဆက်သွယ်မှု prefrontal နှင့် subcortical အဆောက်အဦများ၏ထစ်အငေါ့လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးပုံစံများကိုအထောက်အကူပြုရန်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကျယ်ပြန့်စာပေကထောက်ခံနေသည် deviant အပြုအမူ (ဥပမာ Birbaumer et al ။ , 2005; Contreras-Rodriguez et al ။ , 2015; Joyal et al ။ , 2007; Kiehl et al ။ , 2001; မိုးရွာရွာ et al ။ , 1997; ယန်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာ, 2009) ။ သံသယရှိရင်တောင်ကြောင်း limbic နှင့် / သို့မဟုတ် prefrontal အဆောက်အဦများတွင်ယေဘုယျပွောငျးလဲ (ဥပမာ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ,Joyal et al ။ , 2007), အများ၏ dorsolateral စုတစုတိကျတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုညွှန်းပင်ကိုယ်မူလဒေတာကိုလည်းမရှိ prefrontal cortex နှင့် amygdala စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းညှိအတွက် (Lee က et al ။ , 2012) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Schmidt က et al ။ , 2017) ။ ဤဒေသများ (ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့တွင်ပါဝင်ရန်ယူဆနေကြသည်Kärgel et al ။ , 2015; Mohnke et al ။ , 2014; Poeppl et al ။ , 2013) နှင့်ဖြစ်ကောင်းကြောင့် OFC ဖို့ခိုင်မာတဲ့အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများ၏ deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Gillespie et al ။ , 2012) ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်ပါသည်။ limbic အဆောက်အဦများနှင့် prefrontal အကြားလျော့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု cortexအဆိုပါ amygdala နှင့် dorsolateral အစိတ်အပိုင်းများသို့တိုးချဲ့သည့် orbitofrontal cortex အပါအဝင်ယခင်က (Non-ဖောက်ပြန်တဲ့ pedophiles ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှနှိုင်းယှဉ်လျှင် offending pedophiles တစ်နမူနာများတွင်ပြသခဲ့သည်Kärgel et al ။ , 2015) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်များသည်ယခင်လေ့လာမှု၏ယူဆချက်ကို pedophilic preference တစ်ခုမျှသာရှိခြင်းထက်ကလေးသူငယ်များကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများကမောင်းနှင်နိုင်သည်ဟုထောက်ခံသည်။ Kärgelနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်မတူဘဲ (Kärgel et al ။ , 2015), Poeppl နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဘယ်ဘက် dlPFC နှင့်လက်ျာ amygdala ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြောင်းလဲ pedophilia-တိကျတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိခိုက်စေသည်ဟုစောဒကတက် အာရုံကြောကွန်ရက်များ လိင်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်စိတ်ခံစားမှုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သားသမီးများ၏နောက်ဆက်တွဲအမျိုးအစားသတ်မှတ်မှုမှားနေခြင်းနှောင့်ယှက်သဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်း (Poeppl et al ။ , 2015) ။ ဂရုတစိုက်အဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့် CSO များနှင့် pedophilic preference ကို၏သက်ရောက်မှုခွဲခြားကြောင်းလေ့လာမှုများစဉ်းစားသည့်အခါသို့သော်, တဦးတည်း (ကအလုပ်လုပ်တဲ့ entity အဖြစ် dlPFC နှင့် amygdala တို့အကြားထစ်အငေါ့နားချင်းဆက်မှီမဟုတ်ဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုသည်ထက်, အပြုအမူ offending များအတွက်တိကျသောကြောင်းအကြံပြုစေခြင်းငှါ,Kärgel et al ။ , 2015) ။ အလားအလာသားကောင်များကိုရွေးချယ်ခြင်းသည့်အခါဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, လိင် preference ကိုရိုးရှင်းစွာသက်ဆိုင်ရာလိမ့်မည်။
လက်ရှိနှင့်ယခင်တွေ့ရှိချက် prefrontal နှင့် limbic အဆောက်အဦများ-ဆိုလိုသည်မှာ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု-အဘို့, သိမြင်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေး၏အပြောင်းအလဲနဲ့ (ကာလအတွင်းအကြားဆက်စပ်မှုတွေ၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေးCunningham နှင့် Brosch, 2012; Janak နှင့် Tye, 2015; Kärgel et al ။ , 2015; Poeppl et al ။ , 2013) ။ သင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတူတကွလုံလောက်သောနှင့်အတူသက်ဆိုင်ရာစိတ်ခံစားမှုအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်မူတည် ကိုယ်ကျင့်တရား တရားသဖြင့်စီရင် (Massau et al ။ , 2017), နှင့် prefrontal အဆောက်အဦများအားဖြင့်ပဲ့ထိန်း inhibitory ဖြစ်စဉ်များမှတဆင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သာမကြာသေးမီက, Kärgel et al ။ (2016) ပင်သာလွန်သရုပ်ပြ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု သိသိသာသာနိမ့်နှုန်းထားများအားဖြင့်ထင်ဟပ်အဖြစ်, CSO တွေနဲ့ pedophiles ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ CSO မပါဘဲ pedophiles အတွက် ကော်မရှင်အမှားများ လက်ဝဲနှင့်တိုးမြှင့စုဆောင်းမှု posterior cingulate နှင့် GoNogo ပါရာဒိုင်းအတွက်သာလွန်တိုကျရိုကျ cortex ထားခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်မကြာသေးခင်ကတွေ့ရှိချက်အတူတကွလက်ရှိလေ့လာမှုနှင့်အတူနောက်ထပ် (functioning ပြီးစိတ်ပျက်နံရံပစ်ကစားနည်း-limbic ၏သီအိုရီ corroborate စေခြင်းငှါCohen ကို et al ။ , 2002; Kärgel et al ။ , 2015; Poeppl နှင့် Nitschke, 2013; Walter et al ။ , 2007; ရပ်ကွက်, 2014) တစ်ဦး pedophilic preference ကို၏ဖြစ်ပျက်မှု၏ကလေးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့လွတ်လပ်သောများအတွက်တတ်နိုင်သမျှကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အချက်အဖြစ်။ အဆိုပါ OFC, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် PFC နှင့် dorsomedial PFC ပြင်းထန်စွာ amygdala နှင့်အတူအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေစဉ် - ထို dlPFC စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါ်သူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုကောင်းစွာ (နားလည်သဘောပေါက်သည်မဟုတ်ပြုပြင်ဘယ်လိုလမ်းMohnke et al ။ , 2014; Phillips က et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါ Amygdala များ၏အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် OFC နှင့် ventromedial PFC မှပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိုမတှေ့ခဲ့ကွောငျး, အံ့သြစရာဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ (ကိုလည်း amygdala နှင့် dlPFC အကြားတိုက်ရိုက်ခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှုထင်ရှားနေစဉ်Bracht et al ။ , 2009) အခွားသူမြားကို (OFC ဖို့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု limbic အဆောက်အဦကျော် inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အများဆုံးသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းငြင်းDelgado et al ။ , 2008; Phillips က et al ။ , 2008; Rolls, 2004) ဒီတွေ့ရှိချက်များ၏အမူအကျင့်ဆက်စပ်မှုမဟုတ်ဘဲမှန်းဆသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိခဲ့ PFC စပျစ်သီးပြွတ်အလယ်မှာ PFC ဒါပေမယ့်လည်း (inhibitory အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့အရေးပါသောဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်လူသိများသောသာလွန် PFC cortex သာပါဝင်သည်နေစဉ်Kärgel et al ။ , 2016) အ FC အသင်းသိသိသာသာ bis, ADHS-SB နှင့် WURS-K သည်ထံမှထုတ်ယူ Impulse တိုင်းတာဖို့ဆက်နွယ်နေကြောင်းမခံခဲ့ရပါဘူး။ ကျနော်တို့ Impulse နဲ့ဆက်စပ်မှုစောငျ့ရှောကျမပြုခဲ့သည့်အတိုင်းတလျော့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု functioning ပိုမိုမြင့်မားစေရန်အတွက်အလုပ်အမှုဆောင် (စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဆက်စပ်သောကြောင်းမှနျးနိုငျသညျ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, နီးကပ်စွာအတူ related သော,) ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါ dorsolateral prefrontal cortex သမာဓိရှိ။ တချို့ကအတိုင်းအတာများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဤအချက်မှာဆွေးနွေးတင်ပြရပါမည်။ ကယေဘုယျ၌၎င်း, ထိုကဲ့သို့သောအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအဖြစ်အထိခိုက်မခံသည့်အကြောင်းအရာများသေချာနမူနာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှကြွလာသောအခါ, လူမှုရေးဝယ်လိုအားသက်ရောက်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ရှိသည်။ ပြည်နယ်အနားယူ အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတမင်တကာကိုင်တွယ်အတော်လေးအကဲဖြတ်ရန်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်မဖြစ်နဲ့, ဒါကြောင့်, CSO အတွက်အနာဂတ်ရောဂါနှင့်အန္တရာယ်-အကဲဖြတ်များအတွက်အလားအလာချဉ်းကပ်မှုပေးနိုငျသော parameter သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ့လာမှုအများစုသည်ထောင်ချကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏နမူနာကို အသုံးပြု. ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြ, ကခက်ခဲ disentangle မှအောင် paraphilia နှင့်ပြစ်မှု-တိကျတဲ့သက်ရောက်မှု (Mohnke et al ။ , 2014) ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ (အစောပိုင်းသုတေသနအတွက်တွေးဆအဖြစ်ပြစ်မှုတိကျတဲ့သက်ရောက်မှု၏ဖြစ်ပျက်မှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှ Non-pedophilic ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအပေါ်ဥပမာအာရုံစူးစိုက် Kärgel et al ။ , 2015) ။ နောက်ထပ်သုတေသနအကောင့်သို့ဤပြဿနာကိုယူပြီးဂရုတစိုက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ preference ကိုနှင့်အပြုအမူအဘို့မိမိတို့သက်ရောက်မှုကိုထိန်းချုပ်သင့်ပါတယ်။ စုဆောင်းမှုကာလအတွင်းကြီးမားအခက်အခဲများရှိနေသော်လည်းနှင့် လက်တွေ့အကဲဖြတ် ထောင်ကျဘာသာရပ်များ၏, ငါတို့နောက်ဆုံးတော့ထောင်ဒဏ်မှတပါး, ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ် psychotherapeutic ကုသမှုအဖြစ်အာရုံစိုက်မှုမြင့်မားလက်ခံရရှိသူကိုတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားဝန်ကိုထမ်းများနှင့်လူမှုရေးအရသက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုဆိုင်ရာလူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ခဲ့သည်။ တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးအဖြစ်အလားအလာရှက်ကြောက်ဘို့ထိန်းချုပ်ဖို့, ငါတို့မပါဘဲကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတစ်ဦးအုပ်စုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကန့်သတ် pedophilia နှင့်လက်ရှိပြင်းထန် Co-နေကြလို့ပဲမပါဘဲ စိတ်ရောဂါ သို့မဟုတ် psychopharmacological ဆေး။ သို့သော် CSO-P ကိုနမူနာနေဆဲ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ခဲ့ တစ်သက်တာ ထို့အပြင်ဖောက်ပြန်တဲ့အပြုအမူ၏ရှုပ်ထွေးသော etiology အတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထားတဲ့စိတ်ရောဂါ comorbidity (ဥပမာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမမှန်) ။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အထူးသဖြင့်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောသတ်သတ်မှတ်မှတ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုစောဒကတက်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သောသို့မဟုတ်နိုင် antisocial အပြုအမူ ယေဘုယျအားဖြင့်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့မှန်ကန်အဖွဲ့အစည်းတှငျနထေိုငျ၏မျှသာတကယ်တော့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာဝပြောရေးတခုတခုအပေါ်မှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့နိုင် (ကင် 2015) ။ ထောင်ချခံရနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည့်အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်မှောင်မိုက်သောနေရာမှကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကိုထောင်ထဲရှိကလေးသူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကအသုံးဝင်သည်။ တွေ့ရှိရသည့်သက်ရောက်မှုများကိုပြစ်မှုသို့မဟုတ် pedophilia တိကျမှုရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးပုံစံသည် ၂ × ၂ စက်ရုံဒီဇိုင်း (CSO + P, P-CSO) ဖြစ်သည်။ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီတွက်ချက်သည်။ နောက်ထပ်သုတေသနထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့ဤယူသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၏အနာဂတ်သုတေသနအတွက်၊ ကုထုံးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုတိုးတက်မှုနှင့် CSO ကိုကာကွယ်ခြင်းအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအလေးထားပြောကြားလိုသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများအတွက်ထိရောက်သောကုသမှုနည်းဗျူဟာများကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေသည်မှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ် Cochrane ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (Khan က et al ။ , 2015) နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှု (ဒန်းနစ် et al ။ , 2012) အမှန်တကယ်ကုသမှုမဟာဗျူဟာဤအရပ်မှအသစ်ကုသမှုချဉ်းကပ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏လျော်သောအကဲဖြတ်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည် reoffending ၏ရေရှည်အန္တရာယ်လျှော့ချနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမသက်သေအထောက်အထားရှိကွောငျးကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု, limbic အဆောက်အဦများ၏ prefrontal စည်းမျဉ်းများနှင့်ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူအနားယူ၏ဆက်စပ်မှုနှင့် ပတ်သက်. အတွင်းနေရာအနှံ့ကြားဆက်ဆံရေးသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသညျ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကုသဖို့ထိရောက်တဲ့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်စေကဲ့သို့သောသည်ဤဖွဲ့စည်းပုံတိုးမြှင့်လူသိများတိကျတဲ့ကုထုံးချဉ်းကပ်မှုအားဖြင့်ဤလျော့နံရံပစ်ကစားနည်း-limbic FC အသင်းကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်တယ် သတိ-based သိမြင်မှုကုထုံး (MBCT; Frewen et al ။ , 2010) နှင့်လွှဲပြောင်းခြင်း-အာရုံစူးစိုက် psychotherapy (ဖာရ et al ။ , 2016), သို့မဟုတ် transcranial ဆွနည်းစနစ် (tDCS မှတဆင့်ဤဒေသများလှုံ့ဆော်ရန်တိကျသောနည်းစနစ်အားဖွငျ့; Gbadeyan et al ။ , 2016; Padberg et al ။ , 2017) သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက် Real-time fMRI (Paret et al ။ , 2016).
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်လျော့ကြောင်းအကြံပြု အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှု လက်ျာ CMA နှင့်လက်ဝဲ dlPFC အကြား, အများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ် neurobiological ယန္တရားများ ကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့အခြေခံ။ ဤအအဆောက်အဦများ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုချို့ယွင်းအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ကုထုံးကြားဝင်သူတို့ကဤအဆောက်အဦများအကြား functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအားကောင်းလာစေရန်တတ်နိုင်ကြသည်ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဆန်းစစ်ရပါမည်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကျွန်တော် OFC နှင့် ventrolateral သို့မဟုတ် ventromedial PFC မှပြောင်းလဲ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ နောက်ထပ်သုတေသနစိတ်ခံစားမှုများနှင့်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားဆက်စပ်မှုတွေပေါ်အလင်းကိုသွန်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပြီး, အထွေထွေအတွင်း deviant လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူတစ်ဦးပိုမိုနားလည်ရန်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်ပိုပြီးထူးခြားနှင့် ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်.
အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖန်တီးခြင်းအတွက်၎င်းတို့၏အထောက်အပံ့အတွက် Agnes Bechinie ကင်မ် Borchert နဲ့ Lisa Christoph ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသနအခြေခံသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားများအပေါ်တစ်ဦး multisite သုတေသနစီမံကိန်းကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် pedophilia ပညာရေးနှင့်သုတေသန၏ဖက်ဒရယ်ဝန်ကြီးဌာန (BMBF) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသော (NeMUP ခေါ်) ကလေးများဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှားယွင်းစေ: 01KR1205 BS, မဂ္ဂါဝပ်, KMB, HW, JP နှင့် THCK ရန်။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလည်းဂျာမန်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (DFG) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်: Schi 1034 / 3-1 BS ရန်။
အောက်ပါဤဆောင်းပါးကိုနှင့် ပတ်သက်. ဖြည့်စွက်ဒေတာနေသောခေါင်းစဉ်:
Download စကားလုံးစာရွက်စာတမ်း (15KB)docx ဖိုင်တွေနဲ့အတူကူညီပါ
နောက်ဆက်တွဲစားပွဲပေါ်မှာ 1 ။
နောက်ဆက်တွဲစားပွဲပေါ်မှာ2။
Download စကားလုံးစာရွက်စာတမ်း (16KB)docx ဖိုင်တွေနဲ့အတူကူညီပါ
နောက်ဆက်တွဲစားပွဲပေါ်မှာ3။
ဒေတာကိုမရရှိနိုင် / data ကိုတောငျးဆိုခကျြအပျေါရရှိနိုင်ပါလုပ်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ
Amunts et al ။ , 2005
Amunts, O. Kedo, အမ် Kindler, P. Pieperhoff, အိပ်ချ် Mohlberg, NJ Shah က, U. Habel, အက်ဖ် Schneider, K. Zillesလူ့ amygdala, hippocampal ဒေသနှင့် entorhinal cortex ၏ Cytoarchitectonic မြေပုံ: intersubject အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေပြမြေပုံများ
Anat ။ Embryol ။ , 210 (2005), စစ။ 343-352, 10.1007/s00429-005-0025-5
CrossRefScopus အတွက်ကြည့်ရန်မှတ်တမ်းGoogle Scholar
Ashburner နှင့် Friston, 2005
Ashburner, KJ Fristonunified segment
Neuroimage, 26 (2005), စစ။ 839-851, 10.1016 / j.neuroimage.2005.02.018
ဒေါင်းလုပ် PDF ဖိုင်ရယူရန်Scopus အတွက်ကြည့်ရန်မှတ်တမ်းGoogle Scholar
Baena et al ။ , 2010
Baena, PA ဆိုပြီး Allen က, KP Kaut, RJ ခန်းမသိမြင်မှု / စိတ်ခံစားမှုပေါင်းစည်းမှု၏အရေးပါမှု: prefrontal function ကိုအတွက်အသက်အရွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုတွင်
Neuropsychologia, 48 (2010), စစ။ 319-333, 10.1016 / j.neuropsychologia.2009.09.021
Baird et al ။ , 2004
အေဒီ Baird, SJ Wilson က PF Bladin, MM Sales, DC က Reutensအဆိုပါ amygdala နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ drive ကို: ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဝက်ရူးပြန်ရောဂါခွဲစိတ်ရာမှထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို
အမ်း။ Neurol ။ , 55 (2004), စစ။ 87-96, 10.1002 / ana.10997
Ballard et al ။ , 2011
IC Ballard, VP Murty, RM Carter က, JJ MacInnes, SA Huettel, RA AdcockDorsolateral prefrontal cortex လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူစတင်ရန် mesolimbic dopaminergic ဒေသများတွင်မောင်းနှင်
neuroscience ။ , 31 (2011), စစ။ 10340-10346, 10.1523 / JNEUROSCI.0895-11.2011
Barth et al ။ , 2013
Barth, အယ်လ် Bermetz, အီး Heim, အက်စ် Trelle, T. Toniaကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလေးသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုလက်ရှိပျံ့နှံ့: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်
int ။ ဂျေ Publ ။ ကနျြးမာရေး, 58 (2013), စစ။ 469-483, 10.1007/s00038-012-0426-1
Beauregard et al ။ , 2001
Beauregard, ဂျေLévesque, P. Bourgouinစိတ်လှုပ်ရှားမှုမသိ Self-စည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောဆက်စပ်
neuroscience ။ , 21 (2001), p ။ RC165
Scopus အတွက်ကြည့်ရန်မှတ်တမ်းGoogle Scholar
Becharaဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို: orbitofrontal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူအာရုံကြောလူနာများထံမှသက်သေအထောက်အထား
ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်။ , 55 (2004), စစ။ 30-40, 10.1016 / j.bandc.2003.04.001
Bernstein နှင့်က Fink, 1998
Bernstein, အယ်လ်က Finkကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာမေးခွန်းလွှာ: တစ်နောက်ကြောင်းပြန်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံစာ
စိတ်ဓာတ်ကော်ပိုရေးရှင်း, San Antonio တွင်, TX (1998)
Birbaumer et al ။ , 2005
Birbaumer, R. Veit, အမ် Lotze, အမ် Erb, C. Hermann, ဒဗလျူ Grodd, အိပ်ချ် Florpsychopathy အတွက်လစ်လပ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အေးစက်: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatric ။ , 62 (2005), စစ။ 799-805, 10.1001 / archpsyc.62.7.799
Blanchard ဖြစ်ပြီး et al ။ , 2006
Blanchard ဖြစ်ပြီး, ME Kuban, T. Blak, JM Cantor, P. Klassen, R. Dickeystepdaughters, ဇီဝဗေဒသမီးကတခြားဇီဝ related မိန်းကလေးများနှင့်မသက်ဆိုင်သောမိန်းကလေးငယ်များဆန့်ကျင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ nonadmitting အတွက် pedophilic အကျိုးစီးပွား Phallometric နှိုင်းယှဉ်
လိင်။ ဂျေ Res အလွဲသုံးစားပြုမှု။ , ။ ပြုမူဆက်ဆံ 18 (2006), စစ။ 1-14 10.1007/s11194-006-9000-9
Bracht et al ။ , 2009
Bracht, O. Tüscher, အက်စ် Schnell, ခ Kreher, N. Rüsch, V. Glauche, K. Lieb, ဃ Ebert, ka Il'yasov, ဂျေ Hennig, C. Weiller, LT ဗန် Elst, ဃ Saurဖြစ်နိုင်ခြေပြမြေပုံများပေါင်းစပ်ပြီးအားဖြင့် prefronto-amygdalar လမ်းကြောင်း၏ထုတ်ယူခြင်း
စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ Neuroimaging ။ , 174 (2009), စစ။ 217-222, 10.1016 / j.pscychresns.2009.05.001
Cohen ကို et al ။ , 2002
LJ Cohen ကို, K. Nikiforov, အက်စ် Gans, O. Poznansky, P. McGeoch, C. Weaver ဥပမာရှငျဘုရငျ, K. Cullen က, ဗြဲ Galynkerငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများစွာလိင်ကွဲအထီးကျူးလွန်သူ: တစ်ပဏာမအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမော်ဒယ်
Psychiatric ။ မည်သို့, 73 (2002), စစ။ 313-336, 10.1023 / A: 1020416101092
Collins et al ။ , 1998
DL Collins, AP Zijdenbos, V. Kollokian, JG စွတ်ဖားဆွဲ, NJ Kabani, CJ Holmes, AC အအီဗန်လက်တွေ့ကျကျဒစ်ဂျစ်တယ်ဦးနှောက် Phantom ၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေး
ကို IEEE ဖြတ်ကျော်။ Med ။ Images ။ , 17 (1998), စစ။ 463-468, 10.1109 / 42.712135
Contreras-Rodriguez et al ။ , 2015
Contreras-Rodriguez, ဂျေ Pujol, ဗြဲ Batalla, BJ Harrison, C. Soriano-Mas, ဂျေ Deus, အမ်ဇျ-Solà, ဃMacià, V. Pera, R. Hernandez-RIBA, ဂျေPifarré, JM Menchón, N. Cardonerစိတ်၏ prefrontal cortex အတွက် functional ဆက်သွယ်မှုဘက်လိုက်မှု
Biol ။ Psychiatric ။ , 78 (2015), စစ။ 647-655, 10.1016 / j.biopsych.2014.03.007
Cunningham နှင့် Brosch, 2012
WA Cunningham, T. Broschစိတ်ခွန်အားနိုး salience: amygdala စရိုက်များ, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, တန်ဖိုးများနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကနေစာ
Curr ။ dir ။ Psychol ။ သိပ္ပံ။ , 21 (2012), စစ။ 54-59, 10.1177 / 0963721411430832
Curtis နှင့် D'Esposito, 2003
အီး။ Curtis, အမ် D'Espositoအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်အတွင်း prefrontal cortex အတွက် persistent လှုပ်ရှားမှု
ခေတ်ရေစီးကြောင်းသိမြင်မှု။ သိပ္ပံ။ ,7(2003), စစ။ 415-423
Davidson et al ။ , 2000
RJ Davidson, KM Putnam, CL Larsonစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်း-တစ်အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်၏ရှေ့ပွေးနိမိတျ၏အာရုံကြော circuitry အတွက်ကမောက်ကမဖြစ်မှု
သိပ္ပံ, 289 (2000), စစ။ 591-594, 10.1126 / SCIENCE.289.5479.591
Davis က, 1997
Davis ကကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်တုံ့ပြန်မှု၏ Neurobiology: အ amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍကို
Salloway, P. မော်လီကဂျေ Cummings က (Eds ။ ), Limbic နှင့် Subcortical Disorders ၏ Neuropsychiatry အမေရိကန်စိတ်ရောဂါစာနယ်ဇင်း, ဝါရှင်တန်ဒီစီ (1997), စစ။ 71-94
Delgado et al ။ , 2008
Delgado, KI အနီး je Ledoux, EA ၏ Phelps MRအာရုံကြော circuitry conditional ကြောက်ရွံ့မျိုးသုဉ်းရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအခြေခံ
အာရုံခံဆဲလျ, 59 (2008), စစ။ 829-838, 10.1016 / j.neuron.2008.06.029
ဒန်းနစ် et al ။ , 2012
ဂျေဒန်းနစ်, O. Khan က, အမ် Ferriter, N. Huband, MJ Powney, C. Dugganလိင်ကဖောက်ပြန်တဲ့၏အန္တရာယ်မှာစေတနာစိတ်ပျက်သို့မဟုတ်ဖြစ်ကြောင်းကြသူအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်
Cochrane ဒေတာဘေ့စ Syst ။ ဗျာ, 12 (2012), 10.1002 / 14651858.CD007507.pub2
Dominguez et al ။ , 2001
Dominguez, ဖက်စပ် Riolo, Z. Xu, EM Hullယင်းသုတ်ရည်ထိ medial amygdala နှင့် medial preoptic dopamine လွှတ်ပေးရန်နေဖြင့်စည်းမျဉ်း
neuroscience ။ , 21 (2001), စစ။ 349-355
Dörfel et al ။ , 2014
Dörfel, J.-P. Lamke, အက်ဖ်ဒေါ့မွန်, U. Wagner, အက်စ် Erk, အိပ်ချ် Walterစိတ်လှုပ်ရှားမှု Detachment, အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း, အာရုံ, ထုတ်ဖော်နှိမ်နင်းရေး၏ဘုံနှင့် differential ကိုအာရုံကြောကွန်ရက်များ: တစ်နှိုင်းယှဉ် fMRI စုံစမ်းစစ်ဆေး
Neuroimage, 101 (2014), စစ။ 298-309, 10.1016 / j.neuroimage.2014.06.051
Eickhoff et al ။ , 2006
SB Eickhoff, အက်စ် Heim, K. Zilles, K. Amuntscytoarchitectonic မြေပုံများအား အသုံးပြု. အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်အတွက်စမ်းသပ်ခြင်းခန္ဓာဗေဒသတ်မှတ်ထားသောယူဆချက်
Eickhoff et al ။ , 2007
SB Eickhoff, T. pause, အက်စ် Caspers, M.-H. Grosbras, AC အအီဗန်, K. Zilles, K. Amuntsrevisited ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာ cytoarchitectonic ဒေသများသို့အလုပ်လုပ်တဲ့ Active ၏တာဝနျကို
Neuroimage, 36 (2007), စစ။ 511-521, 10.1016 / j.neuroimage.2007.03.060
Eickhoff et al ။ , 2005
SB Eickhoff, Ke Stephan, အိပ်ချ် Mohlberg, C. Grefkes, ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းက Fink, K. Amunts, K. Zillesဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာ cytoarchitectonic မြေပုံများနှင့် functional ဖြစ်စေပုံရိပ် data တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးများအတွက်အသစ် SPM Toolbox
Etkin နှင့်အာမခံ, 2007
Etkin, TD အာမခံစိုးရိမ်စိတ်များ functional neuroimaging: PTSD အတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့တစ် Meta-analysis သည်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ် phobia
နံနက်။ ဂျေ Psychiatric ။ , 164 (2007), စစ။ 1476-1488, 10.1176 / appi.ajp.2007.07030504
Falkner နှင့်လင်း, 2014
AL Falkner, ဃလင်းကျူးကျော်စဉ်အတွင်း hypothalamic ဆားကစ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက်တွင်လတ်တလောတိုးတက်မှုတွေ
တပ်ဦး။ Syst ။ neuroscience ။ , 8 (2014), p ။ 168, 10.3389 / fnsys.2014.00168
Finkelhor et al ။ , 2014
Finkelhor, အေ Shattuck, HA Turner, SL Hamby, et al ။အဆိုပါတစ်သက်တာကလေးသူငယ်လိင်အလွဲသုံးမှုများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အတွက်အကဲဖြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault
မြီးကောင်ပေါက်။ ကနျြးမာရေး, 55 (2014), စစ။ 329-333, 10.1016 / j.jadohealth.2013.12.026
Fox က et al ။ , 2009
MD က Fox, ဃ Zhang က, AZ Snyder, ME Raichleကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ signal ကိုများနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိပြည်နယ်ဦးနှောက်ကွန်ယက်ကိုအနားယူ anticorrelated
Neurophysiol ။ , 101 (2009)
Frewen et al ။ , 2010
PA ဆိုပြီး Frewen, DJA Dozois, RWJ Neufeld, RD လိန်း, အမ် Densmore, TK Stevens, RA Laniusရိုသတိအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစိတ်ခံစားမှုပုံရိပ်စဉ်အတွင်း dorsomedial prefrontal နှင့် amygdala တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်း: တစ်ခု fMRI လေ့လာမှု
Pers ။ Indiv ။ , ။ ကွာခြား 49 (2010), စစ။ 479-484 10.1016 / j.paid.2010.05.008
JM Fusterအဆိုပါ Prefrontal Cortex: ခန္ဓာဗေဒ, ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်, တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ Neuropsychology
(တတိယ ed ။ ), Lippincott-Raven, Philadelphia တွင် (1997)
Fydrich et al ။ , 1997
Fydrich, ခ Renneberg, ခ Schmitz, H.-U. Wittchenနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ် II ကို။ Strukturiertes Klinisches အင်တာဗျူးသားမွေး DSM-IV, Achse II ကို: persönlichkeitsstörungen။ Interviewheft ။ Eine deutschspeachige, erw ။ Bearb ။ ဃ။ amerikanischen Originalversion ဃ။ နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်-II ကိုဗွန်
ကို MB ပထမဦးစွာ RL Spitzer, အမ်မျောက်လွှဲကျော်, JBW Williams က, အယ်လ် Benja
Gbadeyan et al ။ , 2016
Gbadeyan, K. McMahon, အမ် Steinhauser, အမ် Meinzerdorsolateral prefrontal cortex ၏ stimulation သပ္ပါယ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးပိုကောင်းစေပါတယ်: တစ် high-definition transcranial တိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွလေ့လာမှု
neuroscience ။ , 36 (2016), စစ။ 12530-12536, 10.1523 / jneurosci.2450-16.2016
Georgiadis နှင့် Kringelbach, 2012
JR Georgiadis, ML Kringelbachလူ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသံသရာ: ကအခြားအပျော်အပါးမှလိင်ချိတ်ဆက်ဦးနှောက်ပုံရိပ်သက်သေအထောက်အထား
prog ။ Neurobiol ။ , 98 (2012), စစ။ 49-81, 10.1016 / j.pneurobio.2012.05.004
Ghashghaei et al ။ , 2007
HT Ghashghaei, CC ကို Hilgetag, အိပ်ချ် Barbasprefrontal cortex နဲ့ amygdala အကြားခန္ဓာဗေဒတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ခံစားမှုများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ sequence
Neuroimage, 34 (2007), စစ။ 905-923, 10.1016 / j.neuroimage.2006.09.046
Gillespie et al ။ , 2012
SM Gillespie, IJ Mitchell က, ဃ Fisher သည် AR, Beechအဆိုပါအောက်မေ့ Self-စည်းမျဉ်းများ၏အလားအလာ applications များနှင့်ထိန်းချုပ်ထားအသက်ရှူနည်းစနစ်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ပြီးစိတ်ပျက်စိတ်ခံစားမှုစည်းမျဉ်းကုသ
Aggressive ။ အကြမ်းဖက်ပြုမူနေ။ , 17 (2012), စစ။ 333-343, 10.1016 / j.avb.2012.03.005
Golkar et al ။ , 2012
Golkar, တီဘီ Lonsdorf, အေ Olsson, KM Lindstrom, ဂျေ Berrebi, P. Fransson, အမ် Schalling, အမ် Ingvar, အေÖhmanစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းစဉ်အတွင်း dorsolateral prefrontal နှင့် orbitofrontal cortex ၏ကွဲပြားပံ့ပိုးမှုများကို
PLoS တစ်ခုမှာ,7(2012), p ။ e48107, 10.1371 / journal.pone.0048107
Hamilton က, 1996a
Hamilton ကHamilton ကစိတ်ကျရောဂါစကေး
Cips (Ed က။ ), Internationale Skalen သားမွေး Psychiatry, Beltz စမ်းသပ်ခြင်း GmbH, Göttingen (1996)
Hamilton က, 1996b
Hamilton ကHamilton ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုစကေး
Hanson et al ။ , 1999
RF Hanson, HS Resnick, Saunders, DG Kilpatrick, C. အကောင်းဆုံး BEငယ်စဉ်ကလေးဘဝအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏အစီရင်ခံနှင့်ပတ်သက်သောအချက်များ
ကလေးသူငယ် Negl ။ , 23 (1999), စစအလွဲသုံးစားပြုမှု။ 559-569
Hanson နှင့် Harris က, 2000
RK Hanson, AJR Harris ကကျနော်တို့အဘယ်မှာရှိ်ရောက်စွက်ဖက်သင့်သလဲ
Crim ။ တရားမျှတရေးပြုမူနေ။ , 27 (2000), စစ။ 6-35, 10.1177 / 0093854800027001002
Häuser et al ။ , 2011
Häuser, G. အ Schmutzer, အီးBrähler, အိပ်ချ် GlaesmerKindheit und Jugend အတွက် Misshandlungen
Dtsch Arztebl Int, 2011 (108) (2011), စစ။ 287-294
Hellerbach et al ။ , 2013
Hellerbach, V. Schuster, အေ Jansen, ဂျေ SommerMRI Phantom - agar မှအခြားရွေးချယ်စရာရှိသနညျး
PLoS တစ်ခုမှာ, 8 (2013), p ။ e70343, 10.1371 / journal.pone.0070343
Hornorchild sexual abuse: အကျိုးဆက်များနှင့်ဂယက်ရိုက်
ကလေးအထူးကု။ ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, 24 (2010), စစ။ 358-364, 10.1016 / j.pedhc.2009.07.003
Howell et al ။ , 2004
Howell, အေနေ့, အက်စ် Wrightအကျိုးသက်ရောက်စေ, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်လိင်ဖောက်ပြန်တဲ့
Psychol ။ ရာဇဝတ်မှုဥပဒေ, 10 (2004), စစ။ 179-195, 10.1080 / 10683160310001609988
Janak နှင့် Tye, 2015
PH သည် Janak, KM Tyeဆားကစ်ကနေ amygdala အတွက်အပြုအမူမှ
သဘာဝတရား, 517 (2015), စစ။ 284-292, 10.1038 / nature14188
Jenkinson et al ။ , 2002
Jenkinson, P. Bannister, အမ် Brady, S. Smith ကဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေများ၏ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန် linear မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ရွေ့လျားမှုဆုံးမခြင်းများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော optimization
Neuroimage, 17 (2002), စစ။ 825-841, 10.1006 / nimg.2002.1132
ဆက်ပေးသူ et al ။ , 2007
TE ဆက်ပေးသူ, NJ Sachs-Ericsson က, LR Wingate, JS ဘရောင်း, MD Anestis, EA ၏ Selbyသတ်သေရန်ကြိုးစားခြင်း၏ငယ်ဘဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်တစ်သက်တာအရေအတွက်: တစ်ဦးဇွဲနှင့်သီအိုရီအအရေးကြီးသောကြားဆက်ဆံရေး
ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ , 45 (2007), စစ။ 539-547, 10.1016 / j.brat.2006.04.007
Joyal et al ။ , 2007
CC ကို Joyal, DN က Black, ခ Dassylvaလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ deviance ၏ neuropsychology နှင့်အာရုံကြော: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်လေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု
လိင်။ အလွဲသုံးစားမှု, 19 (2007), စစ။ 155-173, 10.1007/s11194-007-9045-4
Kamphausen et al ။ , 2013
Kamphausen, P. Schröder, အက်စ် Maier, K. Bader, ခ Feige, က CP Kaller, V. Glauche, အက်စ် Ohlendorf, အယ်လ် Tebartz ဗန် Elst, အက်စ်Klöppel, ဂျော်ဂျီယာယာကုပ်, ဃ Silbersweig, K. Lieb, O. Tüscherနယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက်ညွှန်ကြားကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်အတွင်း Medial prefrontal ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာ amygdala တုံ့ပြန်မှု
ကမ္ဘာ့ဖလားဂျေ Biol ။ Psychiatric ။ , 14 (2013), စစ။ 307-318, 10.3109 / 15622975.2012.665174
Kärgel et al ။ , 2016
Kärgel, C. Massau, အက်စ် Weiss, အမ် Walter, V. Borchardt, THC Krueger, G. အ Tenbergen, ဂျေ Kneer, အမ် Wittfoth, အေ Pohl, အိပ်ချ် Gerwinn, ဂျေ Ponseti, T. Amelung, KM Beier, အက်စ် Mohnke, အိပ်ချ် Walter, ခ Schifferoffending pedophiles နှိုင်းယှဉ်ပါက Non-ဖောက်ပြန်တဲ့သူအတွက်သာလွန် neurobiological နှင့်အမူအကျင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များအတွက်အထောက်အထား
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ (2016), 10.1002 / hbm.23443
Kärgel et al ။ , 2015
Kärgel, C. Massau, အက်စ် Weiss, အမ် Walter, THC Kruger, ခ Schifferpedophilia ကလေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဖို့လမ်းမကြီးပေါ်တွင်လျော့ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု
လိင်။ Med ။ , 12 (2015), စစ။ 783-795, 10.1111 / jsm.12819
ဒေါင်းလုပ် PDF ဖိုင်ရယူရန်CrossRefScopus အတွက်ကြည့်ရန်မှတ်တမ်းGoogle Scholar
Khan က et al ။ , 2015
Khan က, အမ် Ferriter, N. Huband, MJ Powney ဂျေဒန်းနစ်, C. Dugganလိင်ကဖောက်ပြန်တဲ့၏အန္တရာယ်မှာစေတနာစိတ်ပျက်သို့မဟုတ်များမှာခဲ့ကြသောသူတို့အဘို့ Pharmacological ကြားဝင်
Khan (Ed ။ ), စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏ Cochrane ဒေတာဘေ့စ, John Wiley & Sons, Ltd, Chichester, ဗြိတိန် (2015), 10.1002 / 14651858.CD007989.pub2
Kiehl et al ။ , 2001
Ka Kiehl, Am Smith က RD Hare, အေ Mendrek, BB Forster, ဂျေချောက်ကမ်းပါး, PF Liddleအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့်ထင်ရှားအဖြစ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာစိတ်အားဖြင့်ထိခိုက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် Limbic မူမမှန်
Biol ။ Psychiatric ။ , 50 (2001), စစ။ 677-684, 10.1016/S0006-3223(01)01222-7
ကင်မ်midlife ကျန်းမာရေးအပေါ်ထောင်ချခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ဘဝကို-သင်တန်းချဉ်းကပ်
လူဦးရေ။ res ။ Pol ။ ဗျာ, 34 (2015), စစ။ 827-849, 10.1007 / s11113-015-9365-x
Kingston et al ။ , 2007
DA Kingston, P. Firestone, HM Moulden, JM ဘရက်ဖို့ဒpedophilia ၏ရောဂါ၏ utility ကို: အမျိုးမျိုးသောခွဲခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်
Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ , 36 (2007), စစ။ 423-436, 10.1007 / s10508-006-9091-x
Klucken et al ။ , 2016
Klucken, အက်စ် Wehrum-Osinsky, ဂျေ Schweckendiek, O. Kruse, R. Starkပြောင်းလဲစာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူဘာသာရပ်များအတွက်အာရုံကြောဆက်သွယ်မှု
လိင်။ Med ။ , 13 (2016), စစ။ 627-636, 10.1016 / j.jsxm.2016.01.013
ko et al ။ , 2015
CH Ko, တီဂျေ Hsieh က, PW ဝမ်, WC လင်း CF ယန်း, CS Chen က JY ယန်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင် amygdala ၏ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်
prog ။ Neuro Psychopharmacol ။ Biol ။ Psychiatric ။ , 57 (2015), စစ။ 185-192, 10.1016 / j.pnpbp.2014.11.003
Kondoအဆိုပါ medial amygdala ၏တွေ့ရှိရပါသည်လိင်အတွေ့အကြုံအထီးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူများ၏ပြင်းထန်သောချို့ယွင်းထုတ်လုပ်ရန်
Physiol ။ ပြုမူနေ။ , 51 (1992), စစ။ 939-943
Kriegeskorte et al ။ , 2009
Kriegeskorte, wk Simmons, PSF Bellgowan, CI Bakerစနစ်များကိုမှ neuroscience အတွက်မြို့ပတ်ရထားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: ကို double နှစ်များ၏အန္တရာယ်များ
နတ်။ neuroscience ။ , 12 (2009), စစ။ 535-540, 10.1038 / nn.2303
Langton နှင့်မာရှယ်, 2000
Langton, ဒဗလျူမာရှယ်relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များအတွက်သိမြင်မှုပျက်ယွင်းမှု၏အခန်းကဏ္ဍ
ဥပဒေများ, အက်စ် Hudson, တီရပ်ကွက် (Eds ။ ), လိင်ကျူးလွန်သူများ, Sage, တစ်ထောင်သပိတ်, CA (2000), စစနှင့်အတူ Relapse ကာကွယ်တားဆီးရေး Remaking ။ 167-186
Lee က et al ။ , 2012
Heller, CM ဗန် Reekum, ခနယ်လ်ဆင်, RJ Davidson AS Lee က,Amygdala-prefrontal နားချင်းဆက်မှီစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများတွင်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအခြေခံ
Neuroimage, 62 (2012), စစ။ 1575-1581, 10.1016 / j.neuroimage.2012.05.044
လီယွန်-Carrion et al ။ , 2006
လီယွန်-Carrion, ဂျေ Damas, K. Izzetoglu, K. Pourrezai, JF Martin-Rodriguez, တွင်းရှိမာတင်, MR y က, Dominguez-Moralesစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ PFC activation ၏ differential အချိန်သင်တန်းနှင့်ပြင်းထန်မှု: တစ်အလုပ်လုပ်တဲ့အနီး-အနီအောက်ရောင်ခြည် spectroscopy (fNIRS) လေ့လာမှု
neuroscience ။ လက်တ။ (2006), 10.1016 / j.neulet.2006.04.050
Maletzky နှင့် Steinhauser, 2002
BM Maletzky, C. Steinhauser25 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေနဲ့သိမြင်မှု / အမူအကျင့်ကုထုံးတစ်ခု 7,275 နှစ်နောက်ဆက်တွဲ
ပြုမူနေ။ ပြုပြင်မွမ်းမံ။ , 26 (2002), စစ။ 123-147, 10.1177 / 0145445502262001
အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့် Grol, 2007
RB အင်္ဂါဂြိုဟ်, MJ GrolDorsolateral prefrontal cortex, အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအတွက်အလားအလာနိုင်တဲ့ coding
neuroscience ။ , 27 (2007), စစ။ 1801-1802, 10.1523 / JNEUROSCI.5344-06.2007
Massau et al ။ , 2017
Massau, C. Kärgel, အက်စ် Weiss, အမ် Walter, JHC Ponseti, T. Krueger, အိပ်ချ် Walter, ခ Schifferpedophilia အတွက်ကိုယ်ကျင့်တရားစီရင်တော်မူခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်
Soc ။ သိမြင်မှု။ , neuroscience အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ , 40 (2017), စစ။ 1912-1920 10.1093 / စကင်ဖတ်စစ်ဆေး / nsx077
Miller နဲ့ Cohen ကို, 2001
ek Miller က JD Cohen ကိုprefrontal cortex function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ
Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ , 24 (2001), စစ။ 167-202
Mohnke et al ။ , 2014
Mohnke, အက်စ် Muller, T. Amelung, THC Krüger, ဂျေ Ponseti, ခ Schiffer, အမ် Walter, KM Beier, အိပ်ချ် Walterpedophilia အတွက်ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲ: တစ်ဝေဖန်သုံးသပ်မှု
prog ။ Neurobiol ။ , 122 (2014) (2014), စစ။ 01-23, 10.1016 / j.pneurobio.2014.07.005
Motzkin et al ။ , 2011
JC Motzkin, JP Newman က, ka Kiehl, အမ် Koenigspsychopathy အတွက်လျှော့ချ prefrontal ဆက်သွယ်မှု
neuroscience ။ , 31 (2011), စစ။ 17348-17357, 10.1523 / JNEUROSCI.4215-11.2011
Moul et al ။ , 2012
Moul, အက်စ် Killcross, MR Daddspsychopathy အတွက် differential ကို amygdala activation ၏တစ်ဦးကမော်ဒယ်
Psychol ။ ဗျာ, 119 (2012), စစ။ 789-806, 10.1037 / a0029342
နယူး et al ။ , 2007
နယူး, EA ၏ Hazlett, က MS Buchsbaum, အမ် Goodman, SA Mitelman, R. Newmark, R. Trisdorfer, MM Haznedar, HW Koenigsberg, ဂျေ Flory, LJ Siever ASAmygdala - နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက် prefrontal အဆက်ပြတ်
Neuropsychopharmacology, 32 (2007), စစ။ 1629-1640, 10.1038 / sj.npp.1301283
Newman က, 1999
အနောက်တောင်ဘက်တွင် Newman ကအထီးမျိုးပွားမှုအပြုအမူအတွက် medial တိုးချဲ့ amygdala ။ အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေလူမှုရေးအပြုအမူကွန်ယက်တွင်တစ်ဦးက node ကို
အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ , 877 (1999), စစ။ 242-257
Öngür et al ။ , 2003
ကူးတို့, JL စျေးကို AT Öngür,လူ့ Orbital နှင့် medial prefrontal cortex ၏ Architectonic subdivision
comp ။ Neurol ။ , 460 (2003), စစ။ 425-449, 10.1002 / cne.10609
Padberg et al ။ , 2017
Padberg, U. Kumpf, U. Mansmann, U. အုန်း, C. Plewnia, ခ Langguth, P. Zwanzger, အေ Fallgatter, ဂျေ Nolden, အမ်ဘာဂါ, ဃ Keeser, R. Rupprecht, P. Falkai, A. အ Hasan, အက်စ် Egert, အမ် Bajboujအဓိကစိတ်ကျရောဂါများအတွက်ကုသမှုအဖြစ် Prefrontal transcranial တိုက်ရိုက်လက်ရှိဆွ (tDCS): ရုံးတင်စစ်ဆေး (DepressionDC) ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပေါင်းစုံပါသုံးဆမျက်စိကန်းသောကျပန်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ၏လေ့လာမှုဒီဇိုင်းနှင့်နည်းစနစ်
အီးယူအာရ်။ Arch ။ Psychiatric ။ Clin ။ neuroscience ။ (2017), စစ။ 1-16, 10.1007 / s00406-017-0769-y က
Paret et al ။ , 2016
Paret, R. Kluetsch, ဂျေ Zaehringer, အမ် Ruf, T. Demirakca, အမ် Bohus, G. အ Ende, C. SchmahlBPD လူနာအတွက် Real-time fMRI neurofeedback နှင့်အတူ amygdala-prefrontal ဆက်သွယ်မှု၏ ALTER
Soc ။ သိမြင်မှု။ , neuroscience အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ , 11 (2016), စစ။ 952-960 10.1093 / စကင်ဖတ်စစ်ဆေး / nsw016
က Parker et al ။ , 2014
Ke က Parker, HW Johns, TG Floros, MJ Willဗဟို amygdala opioid ဂီယာ 24-ဇအစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့အောက်ပါတိုးမြှင့်မြင့်မားတဲ့အဆီစားသုံးမှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens opioid အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါမဟုတ်
ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ , 260 (2014), စစ။ 131-138, 10.1016 / j.bbr.2013.11.014
Paschke et al ။ , 2016
LM Paschke, ဃDörfel, R. Steimke, ဗြဲ Trempler, အေ Magrabi, Vu က Ludwig, T. Schubert, C. Stelzel, အိပ်ချ် WalterSelf-အစီရင်ခံ Self-ထိန်းချုပ်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုအောင်မြင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းခန့်မှန်း
Soc ။ သိမြင်မှု။ , neuroscience အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ , 11 (2016), စစ။ 1193-1204 10.1093 / စကင်ဖတ်စစ်ဆေး / nsw036
Patton et al ။ , 1995
Patton, အမ် Standford, အီး Barrattအဆိုပါ Barratt Impulse စကေး၏ factor ဖွဲ့စည်းပုံမှာ
Clin ။ Psychol ။ , 51 (1995), စစ။ 768-774
Pereda et al ။ , 2009
NN Pereda, G. အ Guilera, အမ် Forns, ဂျေဂိုမက်ဇ-နီတို, ဂျေဂိုမက်ဇ-နီတိုကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများစွာနိုင်ငံတကာကူးစက်ရောဂါ: finkelhor တစ်ဆက် (1994)
ကလေးသူငယ်ချိုးဖောက်မှုများ။ Negl ။ int ။ ဂျေ, 33 (2009), စစ။ 331-342, 10.1016 / j.chiabu.2008.07.007
ဖာရ et al ။ , 2016
DL ဖာရက်, DR Vago, အိပ်ချ်ပန်, ဂျေ Root, O. Tuescher, BH Fuchs, အယ်လ် Leung, Kernberg, KN Levy, DA Silbersweig, အီး Stern ပာ၏ဂျေ Epstein, မိုင်ကာဣန JF Clarkin, MF Lenzenweger,စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါအတွက်မပွောငျး-အာရုံစူးစိုက် psychotherapy အောက်ပါလက်တွေ့တိုးတက်မှုနဲ့ဆက်စပ် inhibitory ထိန်းချုပ် Frontolimbic အာရုံကြော circuit ကိုအပြောင်းအလဲများ
Psychiatric ။ Clin ။ neuroscience ။ , 70 (2016), စစ။ 51-61, 10.1111 / pcn.12357
Phillips က et al ။ , 2008
ML Phillips က, CD ကို Ladouceur, WC Drevetsမိမိဆန္ဒအလျောက်နဲ့ automatic စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းများ၏အာရုံကြောမော်ဒယ်: စိတ်ကြွရောဂါ၏ pathophysiology နှင့် neurodevelopment ကိုနားလည်ဘို့ဂယက်ရိုက်
Mol ။ Psychiatric ။ , 13 (829) (2008), စစ။ 833-857, 10.1038 / mp.2008.65
Poeppl et al ။ , 2015
Poeppl, SB Eickhoff, PT Fox က, AR Laird, R. Rupprecht, ခ Langguth, ဃ Bzdokဆက်သွယ်မှုများနှင့် pedophilia အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ functional ကို
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ , 36 (2015), စစ။ 2374-2386, 10.1002 / hbm.22777
Poeppl et al ။ , 2014
Poeppl, ခ Langguth, အေ Lairdအထီး psychosexual နှင့် physiosexual arousal ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: တစ်အရေအတွက် Meta-analysis သည်
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ , 35 (2014), စစ။ 1404-1421, 10.1002 / hbm.22262
Poeppl နှင့် Nitschke, 2013
Poeppl, ဂျေ Nitschkepedophilia အတွက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် phenotypic ဝိသေသလက္ခဏာများအကြားအစည်းအရုံး
Psychiatric ။ res ။ , 47 (2013), စစ။ 678-685, 10.1016 / j.jpsychires.2013.01.003
Poeppl et al ။ , 2013
Poeppl, ဂျေ Nitschke, P. Santtila, အမ် Schecklmann, ခ Langguth, မီဂါဝပ် Greenlee, အမ် Osterheider, အေ Mokrospedophilia အတွက်ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် phenotypic ဝိသေသလက္ခဏာများအကြားအစည်းအရုံး
RA PoldrackfMRI များအတွက်အကျိုးစီးပွားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဒေသကြီး
Soc ။ သိမြင်မှု။ , neuroscience အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ,2(2007), စစ။ 67-70 10.1093 / စကင်ဖတ်စစ်ဆေး / nsm006
Qin et al ။ , 2014
Qin, သမဝါယမလူငယ်တို့, X တို့မှာ Duane, T. ချန်, K. Supekar, V. MenonAmygdala ငျဒသေဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အခ်ါ functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအစောပိုင်းကလေးဘဝစဉ်အတွင်းစိုးရိမ်စိတ်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုခန့်မှန်း
Biol ။ Psychiatric ။ , 75 (2014), စစ။ 892-900, 10.1016 / j.biopsych.2013.10.006
မိုးရွာရွာ et al ။ , 1997
မိုးရွာရွာ, အမ် Buchsbaum, အယ်လ် Lacasse, အက်စ် Weiner, C. Block ကို, အေ Siegelpositron ထုတ်လွှတ် tomography အားဖြင့်ညွှန်ပြလူသတ်သမားများအတွက်ဦးနှောက်မူမမှန်
Biol ။ Psychiatric ။ , 42 (1997), စစ။ 495-508, 10.1016/S0006-3223(96)00362-9
Rajkowska နှင့် Goldman-Rakic, 1995
Rajkowska, PS Goldman-Rakicပုံမှန်လူ့ cortex အတွက် prefrontal ဒေသများ၏ Cytoarchitectonic ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်: II ကို။ ဒေသများ9နှင့် 46 ၏နေရာ variable နှင့် Talairach Coordinate System ကိုမှကြားဆက်ဆံရေး
ဦးနှောက်။ cortex,5(1995), စစ။ 323-337
ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2014
MJF ရော်ဘင်ဆင်, SM Warlow, KC Berridgeအလယ်ပိုင်း amygdala ၏ Optogenetic စိတ်လှုပ်ရှားအခြားအထက်တဦးတည်းဆုလာဘ်ကိုလိုက်ရန်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ကျဉ်းမြောင်း
neuroscience ။ , 34 (2014), စစ။ 16567-16580, 10.1523 / JNEUROSCI.2013-14.2014
ET Rollsအဆိုပါ orbitofrontal cortex ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ
ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ်။ , 55 (2004), စစ။ 11-29, 10.1016/S0278-2626(03)00277-X
Rosenbloom et al ။ , 2012
MH Rosenbloom, JD Schmahmann, BH စျေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy
Neuropsychiatry Clin ။ neuroscience ။ , 24 (2012), စစ။ 266-277, 10.1176 / appi.neuropsych.11060139
Rösler et al ။ , 2008
Rösler, P. Retz-Junginger, ဒဗလျူ Retz, R. StieglitzHASE-Homburger ADHS-Skalen သားမွေး Erwachsene
ရွိုင်း et al ။ , 2009
AK ရွိုင်း, Z. Shehzad, DS Margulies, AMC ကယ်လီ, LQ Uddin, K. Gotimer, BB Biswal, FX Castellanos, အမတ် Milhamကျိန်းဝပ်ပြည်နယ် fMRI သုံးပြီးလူ့ amygdala ၏ functional ဆက်သွယ်မှု
Neuroimage, 45 (2009), စစ။ 614-626, 10.1016 / j.neuroimage.2008.11.030
Satterthwaite et al ။ , 2013
TD Satterthwaite, MA Elliott သည်, RT ကို Gerraty, K. Ruparel, ဂျေ Loughead, ME Calkins, SB Eickhoff, အိပ်ချ် Hakonarson, RC ဂုရ, RE ဂုရ, DH Wolf ကငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအချက်အလက်များ၏ preprocessing အတွက်ရွေ့လျားမှုရှေးဟောင်းပစ္စည်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ရှက်ကြောက်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့် filtering ကိုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမူဘောင်
Neuroimage, 64 (2013), စစ။ 240-256, 10.1016 / j.neuroimage.2012.08.052
Schiltz et al ။ , 2007
Schiltz, ဂျေ Witzel, G. အ Northoff, et al ။pedophilic ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက်ဦးနှောက်ရောဂါဗေဒ: လက်ျာ amygdala အတွက်အသံအတိုးအကျယ်လျှော့ချရေး၏သက်သေအထောက်အထားများနှင့်ဆက်စပ်သော diencephalic အဆောက်အဦများ
Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Psychiatric ။ , 64 (2007), စစ။ 737-746, 10.1001 / archpsyc.64.6.737
Schmidt က et al ။ , 2017
Schmidt က, LS မောရစ်, TL Kvamme, P. ခန်းမ, T. Birchard, V. Vooncompulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: prefrontal နှင့် limbic အသံအတိုးအကျယ်နှင့် interaction က
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ , 38 (2017), စစ။ 1182-1190, 10.1002 / hbm.23447
MC Setoကလေးများဆန့်ကျင် Pedophilia နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြစ်မှုကျူးလွန်သူ: သီအိုရီ, အကဲဖြတ်နှင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေး
အမေရိကန်စိတ်ဓာတ်အစည်းအရုံး, ဝါရှင်တန် (2008), 10.1037 / 11639-000
Seto et al ။ , 2006
MC Seto, JM Cantor, R. Blanchard ဖြစ်ပြီးကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းပြစ်မှုများ pedophilia ၏ခိုင်လုံသောအဖြေရှာတဲ့ညွှန်ပြချက်တွေဟာ
ပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ , 115 (2006), စစ။ 610-615, 10.1037 / 0021-843X.115.3.610
သီချင်း et al ။ , 2011
X.-W. သီချင်း, Z.-Y. dong, X.-Y. ရှည်လျား S.-F. လီ, X.-N. Zuo, C.-Z. Zhu, Y. သူ C.-G. yan, Y.-F. ZangREST: ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ကိရိယာတန်ဆာပလာ
PLoS တစ်ခုမှာ,6(2011), p ။ e25031, 10.1371 / journal.pone.0025031
Stoléru et al ။ , 2012
Stoléru, V. Fonteille, C. ပြောင်းဖူး, C. Joyal, V. Moulierကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အော်ဂဇင်၏ functional neuroimaging လေ့လာမှုများ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် Meta-analysis သည်
neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ, 36 (2012), စစ။ 1-29, 10.1016 / j.neubiorev.2012.03.006
Stoltenborgh et al ။ , 2011
Stoltenborgh, MH ဗန် Ijzendoorn, EM Euser, MJ Bakermans-Kranenburgကလေးကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအပေါ်တစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်: ကမ္ဘာတဝှမ်းပျံ့နှံ့၏ Meta-analysis သည်
ကလေးသူငယ်။ , မတရားသဖွငျ့။ , 16 (2011), စစ။ 79-101 10.1177 / 1077559511403920
Thakker နှင့်ရပ်ကွက်, 2012
Thakker, တီရပ်ကွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ reoffending တစ်ခုပေါင်းစပ်သီအိုရီ
Psychiatric ။ Psychol ။ ဥပဒေ, 19 (2012), စစ။ 236-248, 10.1080 / 13218719.2011.561765
Toatesသမာဓိသီအိုရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုနားလညျအတှကျအမူဘောင်, arousal နှင့်အပြုအမူ
လိင်။ res ။ , 46 (2009), စစ။ 168-193, 10.1080 / 00224490902747768
Tzourio-Mazoyer et al ။ , 2002
Tzourio-Mazoyer, ခ Landeau, ဃ Papathanassiou, အက်ဖ် Crivello, O. Etard, N. Delcroix, ခ Mazoyer, အမ် Joliotအဆိုပါ MNI MRI Single-ဘာသာရပ်သည်ဦးနှောက်တစ် macroscopic ခန္ဓာဗေဒကှကျကို အသုံးပြု. SPM အတွက် Active ၏အလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ်ခြင်း
Neuroimage, 15 (1) (2002), စစ။ 273-289
Walter et al ။ , 2008
Walter, အက်ဖ် Bermpohl, အိပ်ချ် Mouras, K. Schiltz, C. Tempelmann, အမ် Rotte, HJ Heinz, ခ Bogerts, G. အ Northoffခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ပုံကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်း fMRI-subcortical နှင့် cortical arousal အတွက်တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အထွေထွေစိတ်ခံစားမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများကွဲပြားခြားနားသွား
Neuroimage, 40 (2008), စစ။ 1482-1494, 10.1016 / j.neuroimage.2008.01.040
Walter et al ။ , 2007
Walter, ဂျေ Witzel, C. Wiebking, U. Gubka, အမ် Rotte, K. Schiltz, အက်ဖ် Bermpohl, C. Tempelmann, ခ Bogerts, HJ Heinz, G. အ NorthoffPedophilia အမြင်အာရုံခေါ်ဆောင်သွားဆွစဉ်အတွင်း hypothalamus နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal cortex အတွက်လျှော့ချ activation ဆက်စပ်နေသည်
Biol ။ Psychiatric ။ , 62 (2007), စစ။ 698-701, 10.1016 / j.biopsych.2006.10.018
အခန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူများ၏ရှင်းပြချက်: တစ်ခုတည်းအချက်သီအိုရီကနေ Integrated ဗဟုဝါဒမှ
လိင်။ , မှထုတ်ပြန်သော။ , 20 (2014), စစ။ 130-141 10.1080 / 13552600.2013.870242
ရပ်ကွက်နှင့် Beech, 2006
ရပ်ကွက်, အေ, Beechလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖောက်ပြန်တဲ့သူတစ်ဦးပေါင်းစပ်သီအိုရီ
Aggressive ။ အကြမ်းဖက်ပြုမူနေ။ , 11 (2006), စစ။ 44-63, 10.1016 / j.avb.2005.05.002
ရပ်ကွက်နှင့် Hudson, 2000
ရပ်ကွက်, SM Hudsonrelapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၏တစ်ဦးက Self-စည်းမျဉ်းမော်ဒယ်
DR ဥပဒေများ, SM Hudson, တီရပ်ကွက် (Eds ။ ), လိင်ကျူးလွန်သူများနှင့်အတူ Relapse ကာကွယ်တားဆီးရေး Remaking;: တစ် Sourcebook, Sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, လန်ဒန် (2000), စစ 79-101 ။
Weissenbacher et al ။ , 2009
Weissenbacher, C. Kasess, အက်ဖ် Gerstl, R. Lanzenberger, အီးတခု, C. Windischbergerpreprocessing မဟာဗျူဟာ၏အရေအတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်: ငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု MRI အတွက်ဆက်စပ်မှုနှင့် anticorrelations
Neuroimage, 47 (2009), စစ။ 1408-1416, 10.1016 / j.neuroimage.2009.05.005
Wittchen et al ။ , 1997
H.-U. Wittchen, အမ် Zaudig, T. Fydrichနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်။ Strukturiertes Klinisches အင်တာဗျူးသားမွေး DSM-IV
(Achse ငါ und II ကို။ Handanweisung)
Worsley et al ။ , 1996
KJ Worsley, အက်စ် Marrett, P. Neelin, AC အ Vandalic, KJ Friston, AC အအီဗန်ဦးနှောက်ကို Activation ၏ပုံရိပ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအချက်ပြအဆုံးအဖြတ်များအတွက်တစ်ဦးကစုစည်းစာရင်းအင်းချဉ်းကပ်
Hum ။ ဦးနှောက် Mapp ။ ,4(1996), စစ။ 58-73
yan et al ။ , 2013
C.-G. yan, B. ဖြစ်သောချုံကောင်း, C. ကယ်လီ, အက်စ် Colcombe, RC Craddock, အေ Di Martino, ဆိုးကျိုးလီ, X.-N. Zuo, FX Castellanos, အမတ် Milhamအလုပ်လုပ်တဲ့ connectomics အပေါ်ခေါင်းကို micromovements ၏သက်ရောက်မှုအတွက်ဒေသဆိုင်ရာမူကွဲတစ်ခုပြည့်စုံအကဲဖြတ်
Neuroimage, 76 (2013), စစ။ 183-201, 10.1016 / j.neuroimage.2013.03.004
yan et al ။ , 2016
C.-G. yan, X.-D. ဝမ်, X.-N. Zuo, Y.-F. ZangDPABI: (Resting-State) ဦး နှောက်ပုံရိပ်အတွက်အချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
Neuroinformatics, 14 (2016), စစ။ 339-351, 10.1007/s12021-016-9299-4
ယန်, အေမိုဃ်းကိုရွာစေ, antisocial အကြမ်းဖက်များနှင့်စိတ်တစ်ဦးချင်းစီအတွက် Prefrontal အခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်: တစ် Meta-analysis သည်
Psychiatric ။ res ။ , 174 (2009), စစ။ 81-88, 10.1016 / j.pscychresns.2009.03.012
"NeMUP" ပညာရေးနှင့်သုတေသနတို့အတွက်ဂျာမန်ဖက်ဒရယ်န်ကြီးဌာနတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ဂျာမန်သုတေသနလုပ်ငန်းစု၏အတိုကောက်ဖြစ်ပြီးအတိုကောက် Neuronal Mechanism Underlying Pedophilia နှင့်ကလေးလိင်အလွဲသုံးမှု။